Tilmaamaha Safarka Brisbane Xalaal - Makhaayadaha - Masaajiddada - Hoteelada Saaxiibtinimada Muslimiinta
Brisbane waa caasimada gobolka Queensland. Gobolka Greater Brisbane waxaa ku nool qiyaastii 2.2 milyan oo qof, taasoo ka dhigeysa magaalada saddexaad ee ugu weyn Australia.
Brisbane waa weynyahay oo waxay noqon kartaa mid caalami ah hadana yar oo ku filan si saaxiibtinimo iyo marin uheli karo, Brisbane waa 'magaalo weyn beerta' oo caan ku ah caleenta, meelaha furan iyo xawaaraha nolosha wacan ee ka dhex muuqda zig-zags ee wabigeeda caanka ah. Helitaanka soo-gaadhis caalami ah intii lagu guda jiray Ciyaarihii Barwaaqo Sooranka ee 1982, Bandhigii Adduunka ee 1988, Ciyaarihii wanaagga ee 2001 iyo Shirweynihii G2014 ee 20, Brisbane sannaddii oo dhan cimilo diirran, muuqaal qurxoon, dadka maxalliga ah oo qurux badan iyo tas-hiilaad heer caalami ah ayaa noqday kaararka loogu talagalay dad badan oo gudaha ah iyo booqdayaasha caalamiga ah, taasoo ka dhigaysa Brisbane magaalada ugu koritaanka badan Australia. In kasta oo horumarkan degdegga ahi uu jiro, haddana waxa uu hayaa xamaasad dhallinyaro, waxaana la odhan karaa waa mid ka mid ah dib-u-dhiska iyo fikirka hore ee caasimad kasta oo Australiya ah.
Kumanaan kun oo sano kahor degitaanka Yurub, aagga Brisbane waxaa daganaa dadka Turrbal iyo Jagera Aborijiniska. Waxay u yaqaaneen aagga hadda ah degmada ganacsiga ugu muhiimsan inay yihiin Mian-jin, oo macnaheedu yahay "meel u eg sidii kororka". Oraahda Ingiriisiga Australiyaanka ah "adag yakka" - oo macnaheedu yahay "shaqo adag" - waxay ka timid dadka reer Jagera, waana hubaal waxa deganayaashii reer yurub ay kala kulmeen cimilada qoyan ee Brisbane.
Aagga South East Queensland waxaa baaray badmareenka Ingriisiga ah ee Matthew Flinders. 17kii Luulyo 1799, Flinders waxay soo caga dhigatay halka hadda loo yaqaan Woody Point oo uu ugu magac daray "Red Cliff Point" - hadda Redcliffe ka dib buuro dhaadheer oo midab cas leh oo ka muuqda gacanka. Sanadkii 1823 Badhasaabkii New South Wales Sir Thomas Brisbane wuxuu faray in heshiis ciqaabeed woqooyi cusub la sameeyo, looguna talo galay in lagu xareeyo maxaabiista halista ah meel fog, koox sahamin oo uu hogaaminayo John Oxley ayaa sii baartay Moreton Bay. Heshiiskii asalka ahaa ee ciqaabta waxaa laga aasaasay Redcliffe laakiin markii dambe waxaa loo wareejiyay meel ka sii hooseysa biyaha gacanka halkaas oo saadka biyaha macaan aad loogu kalsoonaan karo. Oxley waxay degelkan cusub ugu magacdartay "Brisbane" iyadoo lagu sharfayo Guddoomiyaha Gobolka.
Dhacdooyin taxane ah oo waaweyn oo xagga socdaalka ah ayaa ka dhacay tobanaankii sano ee xigay kuwaas oo la yimid warshado xoog leh iyo horumarin ganacsi oo gobolka ah. Sanadkii 1838, deganayaal xor ah oo aan dambi lahayn ayaa u dhaqaaqay aaga waxayna riixeen in la xiro jeelka lana sii daayo dhulka aagga. Sannadkii 1859, orod dahab ah ayaa horseeday aasaaskii gumeysiga Queensland oo ay caasimad u tahay Brisbane inkasta oo Brisbane aan lagu darin magaalo illaa 1902. Sannadkii 1925-kii, Baarlamaanka Gobolka Queensland wuxuu abuuray Sharciga Magaalada Brisbane oo sameeyay hal dowladda magaalada Brisbane, weli waa hay'adda ugu weyn ee magaalooyinka waaweyn ee Australia iyo mid ka mid ah kuwa adduunka ugu ballaaran. In kabadan labaatan degmooyin yaryar iyo shilal ayaa laysku daray si loo sameeyo Magaalada Brisbane. 1930 waxay ahayd sanad muhiim u ah Brisbane markii la dhamaystiray Brisbane City Hall, ka dibna dhismaha ugu dheer magaalada iyo Masaajidka Xusuusta ee Fagaaraha ANZAC kaas oo tan iyo markii uu noqday xusuusta dagaalka Brisbane ugu weyn. Dhismayaashaan taariikhiga ah oo ay weheliyaan Buundada Sheekada oo la furay 1940 waa astaamo muhiim ah oo gacan ka geysta qeexidda astaamaha qaab dhismeedka magaalada.
Intii lagu guda jiray Dagaalkii Labaad ee Adduunka, Brisbane wuxuu udub dhexaad u ahaa ololihii Isbahaysiga markii Dhismihii AMP - hadda MacArthur Central loo adeegsaday inuu noqdo xarunta Koonfur Galbeed ee Baasifigga General Douglas MacArthur, oo ah madaxa ciidamada Isbahaysiga Baasifigga. 1942, Brisbane waxaa ka dhacay iska horimaad gacan ka hadal ah oo u dhaxeeyay booqashada shaqaalaha militariga Mareykanka, adeegayaasha Australia iyo dadka rayidka ah taasoo dhalisay hal dhimasho iyo dhowr dhaawac. Dhacdadani waxay caan ku noqotay in loo yaqaan Dagaalkii Brisbane.
Postwar Brisbane waxay sameysay ceebeyn “magaalo weyn”, sawirka siyaasiyiinta magaalada iyo suuqleyda ayaa aad u daneynayay in meesha laga saaro laakiin inkasta oo uu si isdaba joog ah u kobcayay, horumarka Brisbane waxaa calaamadeeyay dhibaatooyin kaabayaasha dhaqaalaha. Dowlad Goboleedka waxay biloowday barnaamij weyn oo ah isbadal iyo cusboonaysiinta magaalooyinka iyadoo ka bilaabanaysa degmada ganacsiga dhexe iyo hareeraheeda. Trams-ka ku yaal Brisbane waxay ahaayeen nooc caan ah oo ah gaadiidka dadweynaha ilaa shabakadda la xiray 1969 iyadoo ka tagtay Melbourne oo ah magaaladii ugu dambeysay ee Australia ee ka shaqeysa shabakad taraamka.
Daadkii 1974 ee Brisbane wuxuu ahaa musiibo weyn oo si ku meel gaar ah u naafeysay magaalada. Xilligan, Brisbane wuu koray oo si casri ah ayuu u casriyeeyay inuu noqdo meel laga tago soogalootiga gobollada. Qaar ka mid ah astaamaha caanka ah ee Brisbane ayaa lumay mararka qaarkood iyada oo la burburiyay duruufaha muranka dhaliyay iyada oo in badan laga baahiyay warbaahinta iyo mudaaharaad dadweyne. Hawlaha ugu waaweyn ee dadweynaha waxaa ka mid ahaa wadada loo yaqaan 'Riverside Expressway', Gateway Bridge ka dibna dib u habeyn lagu sameeyo South Bank kadib markii magaaladu martigalisay World Expo '88 oo ka bilaabaneysa Queensland Art Gallery iyo Arts Center.
Sannadihii ku xigay waxaa jiray soogalooti xoog leh oo soo galay Brisbane iyo gobolka ku xeeran, labadaba gudaha iyo caalamkaba iyadoo ay ku soo qulqulayaan dad badan oo ka yimid Aasiya, Boqortooyada Ingiriiska, New Zealand iyo Polynesia. Tan waxaa keenay qiimaha guryaha oo ka jaban magaalooyinka kale ee Australia, jawi wanaagsan iyo fursado shaqo oo wanaagsan, gaar ahaan qaybaha macdanta iyo dalxiiska. Kobaca dadka ee Brisbane wuxuu dhaafey celceliska qaranka sanad kasta ilaa 1990 heer celcelis ahaan qiyaastii 2.2% sanadkiiba.
Laga soo bilaabo 2000, Brisbane waxay ka gudubtay abaar ilaa roobab daadad wata. Bartamihii-2000, heerarka hoose ee biyo-xireenka ayaa u horseeday xannibaad biyo oo daran dadka deegaanka. Ololaha si loo yareeyo isticmaalka biyaha si guul leh ayuu ku dhammaaday oo magaaladu hadda waxay ku faantaa qaar ka mid ah celceliska ugu hooseeya ee isticmaalka biyaha qof kasta oo deggan magaalo kasta oo adduunka horumartay. Maalmahan uma badna inaad heli doontid tubada oo qalalan ama aad aragto calaamado muuqda oo yaraanta. Si kastaba ha noqotee adiga oo ixtiraamaya dadka deegaanka, ka dhig qubayskaaga waxoogaa kooban, isku day sida ugu fiican ee aad u ilaalin karto biyaha oo ka filo dadka deegaanka inay argagaxaan haddii aad ka fogaato tuubada socda.
Dhowr xagaa aad u qoyan ayaa jabiyay abaarta waxayna ku dhammaadeen daadadkii Jannaayo 2011 kaasoo baabi'iyay magaalada. Qaabka caadiga ah ee loo yaqaan 'Queensland fashion', mid ka mid ah shaqaalihii iskaa wax u qabso ugu weynaa ee abid urursada - in ka badan 100,000 oo dadka deegaanka ah oo Brisbane ah iyo mutadawiciin Queensland ah ayaa u soo degay magaalada si ay uga caawiyaan nadaafadda, iyagoo ku kasbaday naanaysta ah "Ciidanka Mud" una oggolaanaya magaalada inay ku soo laabato ganacsiga kaliya toddobaad kadib daadadka. Ciidanka Mud ayaa lagu sharfay magac bixinta CityCat Ferry cusub, "Ruuxa Brisbane" ka dibna Raiisel Wasaaraha Australia Julia Gillard waxay ku tilmaamtay dadka degan Brisbane inay yihiin "kuwa ugu fiican aadanaha", iyagoo hadiyad u siiyay magaalada inay ku maamusho mutadawiciinta.
Marka xilliga qoyan uu ku dhufto woqooyiga Australiya kulaylaha, Brisbane wuxuu la kulmaa maalmo xagaaga kulul oo cad cad leh duufaanno galabnimo leh. Markay qaboobaha u timaado dhanka magaalooyinka caasimada ah ee koonfurta, heerkulka waxaa loo diraa dhalinyarada yar (° C), halka cimilada Brisbane inta badan ay tahay mid qalalan oo qorax leh, iyada oo heer kulka maalinta inta badan uu ka haray 20 ° C, oo u dhigma kan Miami
Summer (Diisambar – Febraayo) qoyaanku wuu sareeyaa heer kulka maalintiina inta badan wuxuu ka sarreeyaa 30 ° C, iyadoo heerkulka habeenkii uu aad u yaraado 20 ° C. Mowjadaha kuleylka ee xilliyada qaarkood waxay sare u qaadi karaan heerkulka ka sarreeya 40 ° C, hase yeeshee kuwani caadi ma ahan. Kaliya waxqabad kasta oo bannaanka ah oo aad ku qabato dhererka maalin-xagaa caadi ah ee Brisbane ayaa kaaga tagi doonta inaad ku maydhato dhidid. Dharka dabacsan ee kaa ilaaliya qorraxda ayaa ah dhar ku habboon inta badan hawlaha caadiga ah, qaboojiyaha ayaa kuu xaqiijin doona hurdo raaxo leh oo habeenkii ah ama raacista gaadiidka dadweynaha. Duufaannada xagaaga oo wata roobab baraf ah iyo roobab culus ayaa caadi ka ah galabtii maalmaha kulul, qoyan. Badanaa si dhakhso ah ayey u gudbaan oo badanaa waxay soo bandhigaan hillaac wanaagsan.
Dayrta (Maarso – Maajo) waxay arkeysaa isbedel qabow oo ku yimid Brisbane oo celcelis ahaan heerkulka maalintii u dhexeeya 20 iyo 30 ° C. Inta badan dalxiisayaasha aan loo isticmaalin cimilada qoyan waxay heli doonaan waqtigan ugu fiican ee la booqan karo Brisbane, maadaama qoyaanku hoos u dhacayo oo gobolku u wareego qaab raaxo leh, qalalan oo qorax leh, kuna habboon howlaha banaanka. Heerkulka waqtiga-habeenkii sida caadiga ah hoos ayuu u dhacaa 10-20 ° C, iyadoo kuleylka ku xeeran maalinta laga bilaabo uu weli ka sii baxayo dhulka, fiidnimada horena weli sii kululaanaya oo raaxo leh, in kasta oo jaakad fudud loo baahan karo habeen dambe.
Winter (Juun – Ogosto) waxay tilmaamaysaa xilliga qalalan ee gobolka, iyadoo Brisbane ay la kulanto maalmo qabow, qorax leh, oo aan daruuro lahayn. Heerkulka ayaa sida caadiga ah kor u kaca illaa 25 ° C inta lagu jiro maalinta oo leh heer-kul-habeenimo oo dhif ah inuu hoos uga dhaco 5 ° C. Qabowga subaxa hore badanaa wuu baaba'ayaa subaxa dhexe badiyaa saacadaha qorraxdu badanaa waa kuwo diiran, hase yeeshe wali waxaa lagugula talinayaa inaad haysato wax diirran oo aad xidhato maadaama tani had iyo jeer aysan ahayn kiiska. Xaafadaha bariga waxay u muuqdaan kuwo qabow maadaama neecawda badda ay ka soo qulqulayaan badda.
Spring (Sebtember – Noofambar) waxay aragtaa dib-u-nooleynta magaalada oo leh maalmo kulul iyo neecawda badda oo cusub oo ka soo galaya badda. Cimiladu waxay la mid tahay bilaha Dayrta, oo leh qoyaan sii kordhaya maaddaama xagaagu soo dhowaanayo.
Macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan cimilada Brisbane iyo cimilada waxaa laga heli karaa khadka tooska ah ee Xafiiska Meteorology ee Australia.
Dhibaatooyinka ay u geysato qorraxda Queensland waa in aan la dhayalsan. Gobolku wuxuu leeyahay heerka ugu sarreeya ee qofkiiba kansarka maqaarka adduunka iyo dalxiisayaashu badanaa imaadaan iyagoo aan diyaar garoobin. Maalin qorrax leh oo ku taal Brisbane, waa wax caadi ah in qoraxdu gubato ka dib ugu yaraan 15 daqiiqo oo ka hooseysa qorraxda duhurkii, laakiin qoraxdu waxay sidoo kale ku dhici kartaa maalmaha daruuraha. Kani kuma eka xagaaga, laakiin wuxuu dhici karaa sanadka oo dhan, xitaa xilliga qaboobaha.
Haddii aad qorsheyneyso maalin dheer bannaanka, marwalba ku dabool shaashadda qorraxda, dharka dabacsan, koofiyad iyo muraayadaha indhaha si aad isaga ilaaliso. Yaree jimicsigaaga banaanka inta lagu jiro kuleylka illaa aad kula qabsaneyso kuleylka. Isla markiiba raadso hoos ama meel hawo leh oo cab biyo badan haddii aad dareento saameynta daalka kuleylka, oo ay kujiraan madax xanuun, lallabbo, wareer, daal, jahwareer ama miyir beelid.
Xafiiska Dalxiiska Brisbane
The Xarunta Macluumaadka Booqdaha ee Brisbane iyo Xarunta Boos celinta Mall-ka Street Street Mall wuxuu furan yahay M – Th 09: 00–17: 30, F 09: 00–19: 00, Sa 09: 00–17: 09, Su iyo ciidaha dadweynaha 09: 30–16: 30 laakiin wuu xidhan yahay Wanaagsan Jimcaha iyo 25 Dec. ☎ +61 7 3006-6290.
U duuli Brisbane
Brisbane waxaa laga heli karaa diyaarad iyadoo la mariyo garoonka weyn ee Brisbane, ama garoonka diyaaradaha ee ku teedsan ee Gold Coast.
Madaarka Brisbane waxay leedahay duulimaadyo toos ah dhammaan caasimadaha Australia iyo Xarumo badan oo Queensland ah. Gaadiidleyda waaweyn ee gudaha waxaa ka mid ah Virgin Australia, Jetstar, iyo Qantas. Gegida dayuuradaha waxaa ka shaqeeya diyaarado badan oo goboleed waxaana suurtogal ah in maalin walba loo duulo inta badan Xarumaha Aasiya (iyo Yurub), Mareykanka iyo New Zealand, iyada oo aan la soo marin Sydney ama Melbourne.
Waxaad ka heli kartaa bas iyo tareen garoonka Gold Coast Airport ilaa Brisbane, adoo adeegsanaya basaska Surfside ee aadaya Robina una wareejinaya tareenka. Hal tikid ayaa ku kacaya ilaa $ 17, waxaadna iibsan kartaa hal tikidh ama waxaad isticmaali kartaa Go Card.
Labada garoon diyaaradeedba waxay leeyihiin xulashooyin badan oo gawaari kiro ah.
Tareen ku raac Brisbane
Adeegyada tareenka ee masaafada dheer labadaba way yimaadaan oo ka baxaan Saldhiga Wadada Roma gudaha magaalada. Adeegyada New South Wales ee ay maamusho NSW TrainLink waxay ka baxaan Platform 2 iyo dhammaan adeegyada kale ee Long Distance waxay ka baxaan Platform 10.
NSW Tareen waxay ka shaqeysaa adeegga tareenka maalin walba laga soo celiyo magaalada Sydney, iyadoo laga sii wado isku xirka Melbourne iyo Canberra
Tareenka Queensland wuxuu adeegyo u leeyahay inta badan Xarumaha Queensland
Ugu safri Brisbane gaari
Soo-booqdayaasha ka imanaya gobollada koonfureed waxay gaari karaan Brisbane labada waddan ee New England iyo Cunningham ama Pacific Highways.
Wadada Bruce (A1) isku xira xeebta waqooyi ee Queensland ilaa Brisbane.
Wadada Baasifigga (M1) isku xira Brisbane ilaa Gold Coast wuxuu kusii socdaa koonfurta xeebta New South Wales.
Wadada Ipswich (M2) wuxuu ku xiraa Ipswich iyo agagaaraha galbeedka Brisbane.
Wadada Warrego (A2) isku xidha Brisbane ilaa galbeedka iyada oo loo sii maro Dooxada Lockyer, Toowoomba iyo Darling Downs.
Wadada weyn ee Cunningham (A15) xiriiriya Brisbane ilaa Koonfurta Queensland iyo bartamaha galbeedka New South Wales.
Adeegyada basaska dhaadheer badankood waxay ka shaqeeyaan heerka 3-aad ee Xarunta Gaadiidka ee Brisbane agagaarka Saldhigga Rome Street ee magaalada gudaheeda ah.
Adeegga Gawaarida Premier waxay bixisaa adeegyo u dhexeeya Sydney iyo Brisbane iyo Brisbane iyo Cairns.
Greyhound Australia xiriiriyaan caasimadaha kale ee gobolada iyo Brisbane iyaga oo adeegsanaya shabakadooda qaran. Gaar ahaan waxay ka shaqeeyaan adeegyo joogto ah inta udhaxeysa Brisbane iyo Sydney, Brisbane iyo Toowoomba ka dibna waxay usii socdaan Roma iyo inta udhaxeysa Brisbane iyo Cairns. Soo-qaadashadu waxaa laga heli karaa garoonka diyaaradaha ee Brisbane ee adeegyada qaarkood.
Tababarayaasha Murrays adeegyadu waxay ka shaqeeyaan inta u dhexeysa Brisbane iyo Toowoomba oo u sii socda magaalada yar ee Miles, galbeedka Toowoomba. Ka soo qaad waxaa laga heli karaa garoonka diyaaradaha ee Brisbane adeegyada qaar.
Baska Queensland waxay ku shaqeeyaan adeegyo qandaraas dawladeed oo u dhexeeya Brisbane iyo meelo badan oo miyi ah iyo kuwo fog. Wadooyinka muhiimka ah ee shirkaddan ay ka shaqeyso waxaa ka mid ah adeegyada u dhexeeya Brisbane iyo Charleville iyada oo loo marayo Toowoomba iyo inta u dhexeysa Brisbane iyo Mt Isa.
Ku safrid markab / safar si Brisbane
Brisbane waxay hoy u tahay terminaalka dalxiis ee caalamiga ah ee ku xiga Portside Wharf
Helitaanka meel kasta oo ka mid ah Brisbane waa macquul si fudud. CBD (Xarunta Dhexe ee Ganacsiga) waa mid siman oo ciriiri ah, taas oo ka dhigaysa mid ku habboon socodka ama baaskiil wadista iyo dhammaan meelaha kale waxaa lagu gaari karaa gaadiidka dadweynaha.
Si kastaba ha noqotee, meelaha qaar way adkaan kartaa in lagu dhex maro dariiqyo dhinta oo isku jira, wadooyin fuuli kara iyo dhaadhacyo dhaadheer. Tani waxay quseysaa qaar ka mid ah xaafadaha magaalada dhexdeeda ah, laakiin gaar ahaan hareeraha magaalada. Haddii aad lumiso nafsaddaada, waxaa lagugula talinayaa inaad aaddo waddada weyn ee kuugu dhow maadaama ay u badan tahay inay basas ama tareenno ku adeegi doonaan. Haddii aad gaari wadid, buugga tusaha wadada ama qeybta GPS-ka ayaa muhiim u ah gaarigaaga. Dadka deegaanku guud ahaan waa kuwo saaxiibtinimo leh oo in ka badan diyaar u ah inay ku caawiyaan haddii aad lumiso, markaa ha ka baqin inaad wax weydiiso.
Brisbane waa magaalo aad ugu fiican socodka waana inaadan wax dhib ah ku qabin inaad ku ag wareegto CBD. Daqiiqado gudahood markaad ku socotid dhinac walba waxaad awoodi doontaa inaad hesho bas, tareen ama saldhig doon. Khariidadaha waxaa laga iibsan karaa dukaamada buugaagta sida QBD (Queensland Books Depot), Dymocks, Xarunta macluumaadka dalxiiska ama internetka laga daawado. Waxa kale oo jira dhowr dariiq oo la wadaago oo bixiya wadiiqooyin raaxo leh/orodka oo ka fog waddooyinka iyo taraafikada. Khariidado faahfaahsan iyo qorsheeyaha waddada ayaa la heli karaa.
Marka laga soo tago CBD-da iyo hareeraheeda, aragtiyaha ayaa si aad ah u faafi kara, markaa waxaad u baahan kartaa inaad tixgeliso qaabab kale oo aad ku wareegi karto.
Ku safro baaskiil magaalada Brisbane
Baaskiiladleyda 'Clem Jones Promenade'
Ku wareegga magaalada iyo Southbank waa fududahay mahadsanid waddooyinka wareegga badan ee webiga.
Golaha Magaalada Brisbane wuxuu ka shaqeeyaa qorshe loo yaqaan CityCycle, kaas oo ku siiya baaskiilado kiro saldhigyo kala duwan oo CityCycle ah oo ku yaal hareeraha magaalada, hase yeeshe, waa inaad ugu yaraan tahay 17 jir inaad ku soo biirto. Qof kasta (oo ay ku jiraan kuwa soo booqda) wuu iska diiwaangelin karaa muddo 24-saacadood ah $ 2 taas oo siinaysa marin u helka dhammaan shabakadda CityCycle, safarro aan xadidnayn iyo nuska saac ee ugu horreeya safar kasta waa bilaash. Waxaad iska diiwaangelin kartaa khadka tooska ah ee isku xira GoCard-kaaga, ama kaarkaaga deynta ku garaac saldhigga CityCycle. . Mar alla markii aad bixiso khidmadda maalinlaha ah ama billaha ah, baaskiiladu waa bilaash in la isticmaalo, illaa iyo inta aad baaskiilka ugu celineyso xarun kasta oo CityCycle ah 30 daqiiqo gudahood. Qiimaha ayaa si xowli ah u kordha 30ka daqiiqo kadib, mana jiro leexasho ay bixiyaan idaacadaha. Koofiyadaha waa qasab sida sharcigu qabo (tanna waxaa lagu fuliyaa ganaax isla goobta ah), laakiin koofiyadaha huruudda ah ee bilaashka ah ayaa si kalsooni darro ah looga heli karaa saldhigyada kireystayaasha. Kala soo bax barnaamijka AllBikes si aad u hubiso goobta dhibcaha kirada leh baaskiil iyo awood soo celin.
Baaskiil wadista lugaha ayaa sharci ka ah aagga Golaha Magaalada Brisbane (xawaaraha ugu badan 10 km / saacaddii), hase yeeshe dadka lugeynaya waxay xaq u leeyihiin wadada. Ka tag bidix oo taxaddar gaar ah marka aad dhex marayso South Bank Parklands maadaama jidka la wadaago (iyo aad u ballaaran) cagta iyo wareegga ay inta badan ku xirmaan kooxo waaweyn oo qaadaya waddada oo dhan, dadka lugeynaya ayaa si lama filaan ah u joojinaya sawirro iyo ciyaareynta carruurta oo si indho la'aan ah u ordaya hortaada . Had iyo jeer waa meel aad u buuq badan in la isticmaalo dawankaaga, markaa isticmaal caqligaaga guud, oo ka deg oo ku riix baaskiilkaaga meelaha dadka lugeynaya.
Khariidado muujinaya wadooyin ballaadhan oo ballaadhan oo loo wada socdo iyo waddooyin wadaag ah oo ku yaal aagga Golaha Magaalada Brisbane ayaa laga heli karaa websaydhka BCC oo qorsheeyaha safarka ayaa laga heli karaa halkan ama adeegsiga khariidadaha Google oo leh qaabka baaskiilka la xushay Wadooyinkan baaskiilladdu waxay bixiyaan hab wanaagsan oo lagu sahminayo oo loogu raaxeysto Brisbane.
Meelaha qaar ee Brisbane waa kuwo aad u buuro badan. Haddii khariiddadaada wadadu ay muujiso isku-xirnaanta waddooyinka wareegaya oo isku dhow taasi waxay calaamad u tahay waddooyinka dhaadheer. Safar gaaban ayaa dhaqso u noqon kara shaqo badan, gaar ahaan haddii aad isticmaaleyso baaskiilada culus ee CityCycle. Ku dhaji webiga markay suurtagal tahay, waa meesha aad ka hesho aragtida ugu fiican waana gebi ahaanba gebi ahaanba siman. Sidoo kale, xarunta CityCycle ee u dhow waxtar yar ayey u tahay soo celinta baaskiilkaaga marka aad joogtid dusha sare ee dusha sare, waana kan hoose.
Haddii aad ka tagto wadiiqooyinka wareegga, jidadka, iyo waddooyinka yaryar waa inaad u diyaar garowdaa inaad la dagaallanto taraafikada magaalooyinka ee mashquulka badan. Xor ayaad u tahay inaad iska indhatirto darawal kasta oo Brisbane ah oo laga yaabo inay ciil u qabaan baaskiilleyda iyo aqoon la’aanta sharciyada waddooyinka ee khuseeya baaskiilleyda; baaskiilleyda waxaa loo oggol yahay inay ku safraan dhammaan waddooyinka magaalada Brisbane. Jidadka gaarka ah ee “baaskiiladaha baaskiillada” ee waddooyinka Brisbane ayaa si isa soo taraysa u soo badanaya waxaana inta badan tilmaamaya waddo cidhiidhi ah oo midabkeedu cagaaran yahay oo ku teedsan dhinaca waddada.
Baabuurta cagaaran waa mid ka mid ah waxyaabihii ugu dambeeyay ee lagu soo kordhiyo magaalada isla markaana caan ku sii kordhaya. Asal ahaan waa riwaayad, waa hab ugub ah oo lagu dhex maro agagaaraha magaalada gudaheeda. Awood u leh inay degaan ilaa 2 qof oo waaweyn iyo 2 caruur yar yar ah (in kastoo ay kala duwanaan karto - la hadal fuushan oo arag waxa aad diyaarin karto), waxay inta badan ka shaqeeyaan inta u dhexeysa West End, South Bank, the CBD, Fortitude Valley iyo webiga halka uu ku yaal inta badan fidsan, in kastoo aad diyaarin karto in lagu geeyo meel kale. Qiimayaashu waxay ka bilaabmayaan $ 5 iyo dalxiisyo ayaa la heli karaa.
Cagaarka cagaaran wuxuu shaqeeyaa dhamaadka usbuuca iyo inta lagu jiro dhacdooyinka gaarka ah. Inta lagu jiro hawlwadeenada maalinlaha ah ee diyaar u ah inay aadaan ayaa badanaa saldhigoodu yahay Bangiga Koonfurta ee 'Wheel of Brisbane'. Habeenkii, waxaad ka heli doontaa Kabaro Cagaaran Bangiga Koonfurta iyo CBD oo dhan.
Qaar badan oo ka mid ah waddooyinka ku yaal Brisbane Central Business District (CBD) waa hal wado, taas oo ka dhigeysa ku kaxeynta aaggan dhib badan dadka aan aqoon u laheyn qaabeynta. Darawallada loo isticmaalo wadista magaalada waa inaysan ku helin Brisbane wax badan oo caqabad ah, iyo baarkinka ayaa si fudud looga heli karaa saldhigyada baabuurta la dhigto ee magaalada, inkasta oo inta badan lagu kaco kharash aad u sarreeya, oo ku dhow $ 40 si caadi ah loo dhigto maalin. Baarkinka $ 15 guud ahaan waxaa lagu heli karaa heshiisyada shimbiraha hore (imow ka hor 9:00, ka tag wixii ka dambeeya 16:00.) Xarunta Dhexe ee Ganacsiga Brisbane (CBD) waxay xadidan tahay dhigashada waddada baabuurkaaga waxayna bixisaa xadgudubyo dhigasho baarkinka baabuurta sharci darrada dhigata. Dhammaan gawaarida la dhigto ee magaalada gudaheeda waa la qiyaasey waana la saxeexay waxayna ku kacaysaa $ 4 saacaddii. Ka fogow ganaaxyada baarkinka adigoo kaliya dhiganaya meelaha baarkinka loo qoondeeyay oo lagu calaamadeeyay khadadka cad. Xariiq rinji huruud ah oo ku teedsan dhinaca bidix wuxuu muujinayaa istaag la'aan iyo baarkin la'aan.
Inta badan jidadka CBD waxay noqdaan jidad cad 16:00 (haddii aan si kale loo saxeexin mooyee), baabuur kasta oo la dhigto wadada dhinaceeda waa la ganaaxi doonaa, la jiidi doonaa ama labadaba. Waa inaad bixisaa jiidista si gaarigaaga dib loogu soo celiyo, ka dibna waxaad rajeyneysaa ganaax inaad raacdo boostada. Hubi calaamadaha iyo calaamadda xariijinta marka aad dhiganeyso baarkinka, ama kaliya si ammaan ah ugu ciyaar oo raadi saldhig baarkin.
Haddii aad raadineyso inaad booqato meelaha ku hareeraysan magaalada, markaa guud ahaan baabuur wuxuu noqon doonaa sida ugu dhakhsaha badan hab kasta oo kale oo lagu soo wareego, marka laga reebo suurtogalka ah dhererka saacadda ugu sarreysa. Brisbane waxay caan ku tahay haysashada wadooyin qoorta dhalada ah iyo wixii caadi ahaan noqon lahaa safar 15 daqiiqo ah ayaa si fudud isu rogi kara saacad ka badan inta lagu jiro waqtiyada ugu badan.
Waxaa jira dhowr waddo oo lacag laga qaado oo ku yaal Brisbane iyo hareeraheeda (oo si cad loo saxeexay loona calaamadeeyay darawalada ku soo dhowaanaya), oo ay ka mid yihiin Buundada loo yaqaan 'Gateway Bridge' ee ka tallaabta wabiga agagaarka garoonka diyaaradaha, tunelka Clem-7 iyo sidoo kale Buundada Go-Inta udhaxeysa. Lacag caddaan ah lama aqbali karo, dadka isticmaala taleefannada waa inay lahaadaan transponder horay loo sii siiyay ama boostada ay ku bixin karaan degel internet ah. Ka hubi bogga go-via wixii faahfaahin dheeraad ah.
Baaskiil, mooto ama mooto
Iyada oo baarkinka waddo xaddidan, iyo inta badan qaali-dhigashada waddada ka baxsan, habka ugu wanaagsan ee loogu wareego CBD waa mootada ama mootada. Baaskiilka iyo mootada la dhigto waa bilaash waxaana jira meelo badan oo loo qoondeeyay in la dhigto mootooyinka iyo mootooyinka.
Mootooyinka mootooyinka, si kastaba ha noqotee, looma oggola jidadka waaweyn ee waaweyn. In kasta oo ay fuuli karaan qofkasta oo haysta liisanka darawalnimada baabuurka, way adag tahay in dhammaan Brisbane lagu arko mooto maaddaama jidadka waaweyn badankood loo kala qaybiyay sida 60-80 km / hr iyo mootooyinka caadiga ah ee 50cc ayaa ku kooban 55 km / saac
Waqooyiga Brisbane waxaad ka heli doontaa darawalo qurux badan oo qurux badan oo loogu talagalay dadka jecel mootooyinka. Dhinaca woqooyi waxaa ku hareeraysan wadooyin badan oo dabeyl leh iyo wadooyin buuro waaweyn oo qof walboo mooto bajaajle ahi ku raaxeysan karo maalin dhan oo mootada uu cabirkiisu le egyahay.
Waxaa jira adeegyo laga heli karo Brisbane iyo Gold Coast oo u fidiya mootooyinka iyo mootooyinka midig ilaa albaabka aad ka timaaddo. Qaarkood xitaa waxay bixin doonaan dhammaan qalabka lagama maarmaanka ah sidoo kale. Fiiri dhowr shirkadood oo kiro ah oo hoose si aad u hesho mooto / mooto ku habboon safarkaaga.
Inta badan shirkadaha kirada baabuurta waaweyn waxay xafiisyo ku leeyihiin Madaarka Brisbane iyo Xarunta Magaalada. Sida caadada u ah shirkado badan oo baabuurta kireeya, inta badan waxaad bixin doontaa lacag qaali ah si aad u soo qaadato ama ugu laabato goobta gegida dayuuradaha. Haddii aad raadinayso inaad ku daboosho masaafo dheer baabuur, hubso in siyaasaddaada kirada ay ku jirto masaafo aan xad lahayn - dhaqaalaha ugu badan ilaa kirada baabuurka ee cabbirka leh waxaa ku jira tan horeba. Shirkadaha kirada baabuurta badankoodu waxay shaqaaleeyaan dadka da'doodu tahay 25 jir iyo wixii ka weyn, qaar ka mid ah dhammaan shirkadaha kiraynta baabuurta ee da'doodu ka yar tahay waxay u kiraystaan ​​darawalada da'doodu ka weyn tahay 18 jir (waxaa jira kharash dheeraad ah oo ku lug leh darawallada da'doodu ka yar tahay).
Tagaasida ayaa ku badan Brisbane oo meelkasta way ku geyn karaan. Shirkadaha waaweyn waxaa ka mid ah Yabs Cabs iyo Black & White Cabs. Dhammaan cabsida waa la soo dhaweyn karaa iyadoo aan loo eegin meesha aad joogto, iyadoo la ogol yahay in saqafkoodu saaran yahay, in kasta oo meelaha qaarkood laga yaabo inay awoodi waayaan inay istaagaan, marka waxaa ugu wanaagsan in mid hore loo sii qabsado. Dhammaan baabuurtu waxay aqbalaan kaararka, kaararka amaahda iyo kaararka deynta. In kasta oo cabsida lagu rakibay cutubyo GPS ah, waxaad caqli gal u tahay inaad ka hubiso darawalka meesha aad u socoto ka hor intaadan dhoofin oo aad hubiso inay diyaar u yihiin inay halkaas aadaan.
Aagagga bannaanka ka baxsan, cabsidu way jiidi doontaa haddii aad ka soo degto dhinaca dhinaceeda waxaana laga heli karaa darajooyinka tagsiga ee loogu talagalay Xarumaha wax laga iibsado, ama baararka iyo baararka dhow. Isla sidaas ayaa laga sheegi karaa magaalada gudaheeda, si kastaba ha ahaatee darajooyinka taksigu aad bay u badan yihiin waxaana sida caadiga ah ka fiican in halkaas laga raaco taksi. Habeenkii inkastoo, gaar ahaan Jimcaha iyo Sabtida, tagaasida ayaa si gaar ah rakaabka uga soo qaada darajooyinkan oo aad nasiib u yeelan lahayd haddii aad meel kale ka hesho. Darajooyinkan waxaa inta badan lala socdaa nabadgelyada waxayna leeyihiin ushers habeenkii. Laga bilaabo saqda dhexe ilaa 5: 30 subaxnimo habeenka Jimcaha iyo Sabtida, dhammaan tagaasida CBD iyo Fortitude Valley waxay noqdaan “FlatFare”, taasoo la micno ah inay jirto qiimo go’an meel kasta oo la siiyo waana inaad bixisaa ka hor intaadan gelin taksiga.
Tagaasida ayaa qaali ku noqon kara Brisbane; safar u dhexeeya garoonka diyaaradaha iyo magaalada wuxuu noqon karaa in ka badan $ 50-60 wuxuuna si fudud ugu socon karaa in ka badan $ 100 haddii aad ka gudubto magaalada weyn ee Brisbane.
Gaadiidka dadweynaha ee Brisbane
Brisbane waxaa si wanaagsan ugu shaqeeya gaadiidka dadweynaha, oo leh shabakado badan oo basaska, tareennada iyo doomaha. Kuwani dhammaantood waxay ku xiran yihiin nidaamka tikidhada tigidhka Go Card smartcard ee magaalada.
Saddexda xulasho ee ugu weyn ee gaadiidka dadweynaha ee Brisbane (doomaha, basaska iyo tareennada) waxaa maamula hal bixiye, oo loo yaqaan TransLink. Tani waxay u oggolaaneysaa wareejinta bilaashka ah in lagu sameeyo saddexda nooc ee gaadiidka kala duwan, iyada oo la siinayo waqti ku habboon iyo xaddidaadaha aagga. Websaydhka TransLink (Taleefanka: 13 12 30 ama soo dejiso barnaamijka 'MyTranslink') wuxuu ku habboon yahay baaritaanka xulashooyinka gaadiidka dadweynaha ee u dhexeeya meelaha la aadayo. Khariidadaha Google ayaa sidoo kale bixiya hagitaan gaadiid dadweyne oo buuxa, oo leh macluumaad dhab ah oo la cusbooneysiiyay dhammaan saddexda nooc.
TransLink waxay leedahay tigidh isku dhafan oo la yiraahdo kaarka tag, kaarka caqliga leh ee aan xiriirka lahayn ayaa la iibsaday ka hor intaadan safrin oo aad lacag ku urursato. Qiimaha waxaa laga jarayaa markaad taabato oo aad bakhtiiso markaad fuusho oo aad ka baxdo gaadiidka dadweynaha. Waa inaad taabataa labada dhinacba iyo dibaddaba dhammaan safarada Go-kaarka iyadoo aan loo eegin qaabka gaadiidka. Ku guuldareysiga inaad taabato waxay sababi doontaa lacag go'an oo ah ilaa $ 30 in lagaa qaado kaarka. Basaska iyo Bisadaha/Doomaha Magaalada waxaa lagu rakibay mishiinnada kaarka go -ga marka aad fuushan tahay. Saldhigyada tareenku waxay leeyihiin albaabyo lagu raaco ama akhristeyaal huruud ah oo gaar ah oo ku yaal masraxa. Dhigashada $ 10 ayaa khuseysa marka aad iibsaneyso kaarka go. Kaararka Go ayaa la iibsan karaa oo kor looga qaadi karaa shaqaalaha saldhigyada tareenka, mashiinnada iibinta tigidhada ee saldhigyada waaweyn iyo meelaha basaska laga raaco, iyo wargeysyada la soo xulay iyo dukaamada raaxada, kuwaas oo badankoodu ku yaal bartamaha magaalada.
Iibsashada kaarka go-goynta ayaa meesha ka saareysa dhibaatada ka jirta aagagga. Qiimaha ayaa lagaa dhimay 30% waana marka aad bixisay 8 safar todobaad gudihiis (Isniinta ilaa Axada). Translink wuxuu adeegsadaa erayga "safar" oo loola jeedo safar dhammaad illaa dhammaad oo ay ku jiraan wareejin kasta oo loo baahan yahay, iyo erayga "safar" oo loola jeedo safar hal dhibic-ilaa-dhibic ah. Safarku wuxuu ka koobnaan karaa hal ama dhowr safar. Markaad samaynaysid dhowr safar si aad ugu tagto meeshaad u socoto wali waa hal safar haddii aad taabato 60 daqiiqo gudahood markaad taabato safarkiiagii hore.
Waad iibsan kartaa tikidhada xaashida ah ee safarka ah si aad ugu safarto dhammaan aagagga aad u baahan tahay inaad ku safarto. Hawl wadeenadu guud ahaan way ogyihiin aagagga ay ku siinayaan haddii aad u sheegto halkaad u socoto. Waxay kaliya ansax ku yihiin hal safar oo hal waddo ah, waxayna ku yimaadaan qiimo sare - laga bilaabo in ka badan $ 4 safar hal waddo ah. Adeegyo kooban (sida City Glider, iyo qaar ka mid ah adeegyada saacadaha ugu sarreeya ee basaska) ayaa horay loo sii bixiyaa oo keliya, waana inaad haysataa Kaarka-Go-ka si aad u raacdo.
Helitaanka kaarka go-ka ayaa kaa badbaadin doonta ugu yaraan 30% tikidhada waraaqaha ee safarada u dhigma. Si kastaba ha noqotee, helitaanka lacag celin lacagta aan la isticmaalin iyo $ 10 dhigaalka ah waxay noqon kartaa dhibaato. Haddii aad ku bixisay kaarka amaahda waxaad u baahan tahay inaad dalbato oo lacagta laguugu soo celiyo jeeg ama laguugu wareejiyo koonto bangi Australia ku yaal. Haddii aad ku bixisay lacag caddaan ah waxaad dib ugu celin kartaa saldhigga tareenka, oo ay ku jiraan saldhigga tareenka garoonka.
Haddii aad samaynaysid safar muddo-gaaban ah ama adeegsanaya Airtrain, waxaad ku iibsan kartaa 3-maalin ama 5-maalmood safar aan xadidnayn SEEQ Card $ 79 iyo $ 129 siday u kala horreeyaan. Kaadhadhka SEEQ waxay u shaqeeyaan sida kaararka caadiga ah ee go go 'si kastaba ha noqotee waxay bixiyaan qiimo-dhimis dheeraad ah meelaha dalxiiska ee kaladuwan ee ku teedsan South-East Queensland. Uma baahnid inaad ka walwasho kor u qaadista iyo soo celinta, laakiin waxaad u halgami doontaa sidii aad uga heli lahayd qiimaheeda mooyee inaad qabato Diyaaradda.
Waa lagu ganaaxi karaa $ 261 safarka adiga oo aan haysan tikidh ansax ah.
Haddii aad isticmaaleyso Kaarka Go, markaa qiimaha oo dhan waxaa loo xisaabiyaa si otomaatig ah iyadoo lagu saleynayo halka aad taabato iyo taabashada.
Kharashku wuxuu kuxiranyahay gaadiidka dadweynaha “aagagga”. 8-da aag waxay sameysmayaan faraantiyo isku dhafan waxayna banaanka uga soo baxayaan CBD (aagga 1) waxayna ku baahsan yihiin South East Queensland oo dhan. Dhammaan khariidadaha rasmiga ah ee gaadiidka dadweynaha ayaa si cad u calaamadeeya aagagga iyo xuduudaha aagga. Inta badan Brisbane waxaa daboolaya aagagga 1 iyo 2. Qiimahaaga waxaa lagu go'aamiyaa Immisa aagagga aad ku safarto. Ku safridda aagagga 2 iyo 3 waxay kugu kici doontaa qiimo la mid ah safarka aagagga 7 iyo 8. Marka lagu daro haddii aad isticmaaleysid tigidh warqad ah, waa inaad ilaalisaa waqtiga xaddidan ee wareejinta si looga fogaado inaad bixiso safarka kale.
Badanaa, joogsiyada waaweyn sida Xarumaha wax -gadashada iyo joogsiyada basaska ayaa loo isticmaalaa xuduudda aagga. Joojinta oo qayb ka ah soohdinta aagga waxaa loo tixgeliyaa inay qayb ka tahay labada aag.
CityFerry iyo CityCat
Doon CityCat ah oo mareysa dhinaca galbeed ee CBD
CityFerries iyo CityCats waxay noqdeen astaanta magaalada waxayna yihiin siyaabo fantastik ah oo loogu tamashleeyo Brisbane webiga agtiisa. The CityCats waa catamarans xawaare sare leh oo joogsi ku leh South Bank iyo Xarunta Magaalada iyo sidoo kale agagaarro badan oo wabiyada ku yaal, waana hab aad loo jecel yahay oo loogu tago dalxiisayaasha. CityFerries waa doonyo dhaqameedyo badan kuwaas oo guud ahaan ku shaqeeya waddooyin gaagaaban oo joogsi badan leh; waxaad ku dambayn kartaa hal haddii ay tahay inaad isticmaasho mid ka mid ah boosteejooyinka yaryar, laakiin ficil ahaan, inta badan meelaha wabiyada laga helo waxaa laga heli karaa CityCats -ka dhaqsaha badan uguna casrisan.
Doomaha ka gudba wabiga, sida Bulimba iyo Teneriffe Cross River Ferry waxay isku xiraan qalabka gaadiidka ee dhinacyada ka soo horjeedka webiga.
Tareenada Brisbane ka weyn waxay ku socdaan khadadka shucaaca. Inta badan adeegyada tareenka ee Brisbane waa kuwo soconaya, iyagoo ka kala safraya dhinac ka mid ah xaafadaha magaalada ilaa kan kale, hase yeeshe dhammaan tareenada waxay u adeegaan Rome Street, Central, Fortitude Valley iyo Bowen Hills iyadoon loo eegin halka ay ku dambeeyaan. Adeegyada magaalada dhexdeeda waxaa sidoo kale lagu qabsan karaa Gold Coast (iyadoo la adeegsanayo isku xirka taraamka Helensvale iyo basaska dhowr istaago kale) iyo Sunshine Coast (iyadoo la adeegsanayo isku xirka adeegyada basaska ee Landsborough iyo Nambour) iyo sidoo kale Australia Zoo (isku xirka baska Beerwah). Tareenadu guud ahaan waxay soconayaan 6AM ilaa saqda dhexe, inkasta oo ay jiraan kala duwanaansho sida socodsiinta habeenka dambe ee Jimcaha iyo Sabtida, isla markaana dhameystiraya horaanta Axadaha.
Brisbane waxay leedahay shabakad ballaaran oo marinnada basaska. Ku dhowaad dhammaan basasku waxay leeyihiin shaashad dijitaal ah oo ku saabsan lambarka waddadooda iyo meelaha ay tagayaan. Meelaha magaalada gudaheeda ah waxaa si aad ah ugu adeega basaska, iyada oo dariiqyada ugu caansan ay ka socdaan 6AM ilaa 11PM ugu yaraan, iyo inta badan jidadka ugu dambayntii lagu joojiyo Saldhigga Queen St Bus, Fortitude Valley (iyada oo loo maro Adelaide St ama Elizabeth St) ama dhinaca baska. Qaar ka mid ah xaafadaha Brisbane ee caanka ku ah firidhsan xaafadaha bannaanka, adeegyadu aad bay uga yaraan karaan ama way yarayn karaan saacadaha shaqada, sidaa darteed waxaa lagugula talinayaa inaad iska hubiso jadwalka haddii aad safarkan samaynayso. Sababtoo ah taraafikada Brisbane, basaska ayaa mararka qaarkood illaa 10 daqiiqo ka daaha inta lagu jiro saacadda ugu sarreysa.
Baska u go'an Brisbane wuxuu ka socdaa marinka koonfurta ama waqooyiga hareeraheeda, iyada oo loo marayo South Bank iyo degmada ganacsiga dhexe. Sababta oo ah basaska tirada badan ee kuyaala bartamaha ganacsiga, wadooyin kale oo badan ayaa adeegsada joogsiyada ku kala firirsan wadooyinka magaalada, marka hadaadan aqoon u laheyn juqraafiga Brisbane, isticmaalka wadada baska ayaa lagugula talinayaa halka ay suurta gal tahay. Wadada baska iyo tareenka waxay ku kulmaan saldhigga Rome Street, labadoodana marka la isku daro waxay si fiican u daboolayaan aagagga muhiimka ah ee gudaha magaalada.
Darawallada ayaa wata qoraallo iyaga la socda, laakiin had iyo jeer ma ahan kuwo badan ama qiimo sare leh. Haddii ay tahay inaad bixiso lacag caddaan ah, iskuday inaad ku bixiso inta saxda ah iyo qadaadiic halka ay suurtagal tahay. Adeegyada qaarkood, gaar ahaan saacadaha ugu sarreeya, gabi ahaanba kama iibiyaan tikidhada dusha sare waxayna aqbalaan oo keliya tigidhada horay loo iibsaday ama kaararka taga. Kuwaani waxaa lagu saxiixay warqadda 'P ' ka hor lambarka wadada. Sida magaalooyin badan, Brisbane waxay leedahay tiro badan oo basaska xawliga ah, sidaa darteed looma maleyn karo in basaska oo dhan ay ilaaliyaan joogsad kasta oo ku teedsan waddooyinka ay ku safrayaan. Saacadda ugu sarreysa waxaa jira xitaa waddooyin dheereeya oo dheereeya ("gantaallo" iyo "rasaas") oo loogu talagalay rakaabka oo aad u yar istaaga gabi ahaanba. Weydii darawalka haddii aadan hubin.
Brisbane sidoo kale waxay leedahay adeegyo basaska habeenkii oo dhan habeennada Jimcaha iyo Sabtida waddooyinka la xushay; tan waxaa lagu calaamadeeyay 'NightLink'.
Wadooyin qiimo leh
'Brisbane City Loop' waa adeeg bas oo bilaash ah oo habboon oo ku socdaalaya labada dhinacba hareeraha CBD. Ka shaqeynta Isniinta ilaa Jimcaha 7 AM-5:50PM 10kii daqiiqo ee kasta laga bilaabo meel kasta oo istaago basaska CBD ee dhalaalaya.
Baska 'Spring Hill Loop' bilaashka ah wuxuu ka shaqeeyaa agagaarka Spring Hill aagga woqooyiga ka xigta CBD waana hab fudud oo looga fogaan karo socodka buuraha dhaadheer ee aagga. Adeeggan basku wuxuu socdaa Isniinta ilaa Jimcaha qiyaas ahaan 30 daqiiqo kasta inta u dhexeysa 6:50 AM iyo 8:25 AM ka dibna 10 daqiiqo kasta illaa 6:05 PM
Baska 'CityGlider' wuxuu u shaqeeyaa sidii adeeg horudhac ah oo loogu talagalay safarka degdega ah ee woqooyi-koonfur iskaga gudba inta udhaxeysa West End iyo Teneriffe Ferry ee Newstead, isagoo istaagaya meel kasta oo basaska buluugga ah ee fudud. Waxay socotaa 5tii daqiiqaba mar inta lagu gudajiro saacada ugu sarreysa (maalmaha shaqada laga bilaabo 7-9AM iyo 4-6PM), iyo 10 ilaa 15 daqiiqo kasta oo udhaxeysa dhammaan saacadaha kale ee hawlgalka. Waxay shaqeysaa Su-Th 5:30 AM-11:30PM, iyo F-Sa 24 saac.
Baska 'Maroon Glider' wuxuu u shaqeeyaa sidii adeeg horudhac ah safarka deg-degga ah ee bari-galbeed ee iskaga gudbaya magaalooyinka Woolloongabba iyo Ashgrove, isagoo istaagaya istaago basaska maroon (madow cas) ah. Adeeggu wuxuu shaqeeyaa M-Su 5:30 AM-11:30PM 10kii daqiiqo ee kasta xilliyada ugu sarreysa (maalmaha shaqada laga bilaabo 7-9AM iyo 4-6PM) iyo 15kii daqiiqo ee kasta ee ka baxsan xilliyada ugu sarreysa. Adeegyadu sidoo kale way shaqeyn doonaan inta lagu jiro habeennada Jimcaha iyo Sabtida (marka laga reebo ciidaha guud mooyee haddii kale haddii aan la xayeysiin) 30 daqiiqo oo u dhexeysa saqda dhexe-5AM.
Waddooyinka '599' iyo '598' waxay sameeyaan Khadka Wareegga Weyn kaas oo magaalada ku wareegaya saacad iyo dhinacba Waxay yihiin hab aad u wanaagsan oo sahaminta xaafadaha dibedda ah oo lagu joojiyo qaar ka mid ah Xarumaha wax iibsiga ee ugu sarreeya Brisbane.
Dhismayaal iyo astaamo caan ah oo ku yaal Brisbane
Aragtida Brisbane oo ka socota dusha sare ee Mt Coot-tha habeenkii
Hoolka Magaalada Brisbane iyo King George Square. Waxay ku taalaa inta udhaxeysa Adelaide iyo Ann Streets, tani waa magaalada taariikhdeeda ugu muhiimsan. Aaggan wuxuu leeyahay Wi-Fi dadweyne oo bilaash ah. Matxafka Brisbane ee ku dhex yaal dhismahan.
Jaamacadda Queensland (St Lucia), St Lucia, Brisbane QLD 4072,. Mid ka mid ah hay'adaha ugu da'da weyn uguna caansan Australia oo ku yaal qalooca wabiga Brisbane. Dhismaheeda dhagaxa ah ee quruxda badan waxaa ku hareeraysan harooyinka qurxinta, Jacaranda boulevards iyo qaar ka mid ah qaab dhismeedka ugu fiican. Soojiidashada soo-booqdayaasha waxaa ka mid ah Maxkamadda Weyn, Matxafka Farshaxanka UQ ee Xarunta James iyo Mary Emelia Mayne, Eleanor Schonell Bridge, Tiyaatarka Schonell iyo harooyinka UQ. Jaamacada waxaa lagu tagi karaa bas ka socda George St nambarada basaska 411, 412 iyo 109 ama waxaa loo marin karaa CityCat.
Gawaarida Brisbane (South Bank), Russel Street, South Brisbane QLD 4101. Gawaarida gawaarida ee kuu oggolaaneysa inaad magaalada ku ilaaliso 60 m oo leh aragtiyo ka gudbaya Wris Brisbane Safarku waa 15-daqiiqo oo lagu raaco meel ku lifaaqan, cimilada la xakameynayo gondola. 10 AM-10PM maalin kasta, $ 20, $ 14 carruur ah 12 sano iyo wixii ka yar, $ 2 carruur ah oo ay da'doodu u dhexeyso hal illaa saddex.
Matxafyada iyo qolalka ku yaal Brisbane
Matxafka Dukaanka Commissariat, 115 William Street,. Tu-F 10 AM-4PM. Lahaanshaha dhismaha ugu da'da weyn ee lagu noolaan karo Queensland Matxafka Dukaanka Commissariat wuxuu iftiiminayaa dhismaha iyo dhinacyada kala duwan ee Brisbane iyo dembiilaha Queensland, gumeysi iyo taariikh dhow. Waxaa wada Royal Society Historical Society of Queensland. Socdaalka maqalka waxaa lagala soo bixi karaa websaydhka kahor. Dadka waaweyn $ 7, tanaasul $ 5. (la cusbooneysiiyay Jan 2016)
Cube-ka, Jaamacadda Tiknoolajiyadda ee Queensland (QUT) (Gardens Point), 2 George St. 10 AM-4PM. Cube waa mid ka mid ah barashada is-dhexgalka ee ugu ballaadhan adduunka ee ballaadhan iyo bandhigyada loogu talagalay in lagu bixiyo dhiirrigelin, sahamin iyo ka-qayb-gal khibrad cilmi-baaris Sayniska iyo injineernimada ee QUT. Halkaan waxaad ka heli doontaa mid ka mid ah jawiga ugu weyn ee is-dhexgalka iyo barashada deegaanka ee cusub ee $ 230-million Xarunta Sayniska iyo injineernimada ee QUT gardens point campus. Waxaad ka daawan kartaa mashaariicda cilmi-baarista ku dhisan ee sayniska, injineernimada, xisaabta iyo tikniyoolajiyadda lagu soo bandhigay in ka badan 40 shaashadood oo taabasho badan taabanaya iyo 14 mashruuc oo qeexitaan sare leh. Cube-ku wuxuu dhiirrigelinayaa oo uu ku hawlan yahay jiilka soo socda ee mufakiriinta iyo wax-qabadyada iyada oo fidin ballaadhan u leh dugsiyada, oo ay ku jiraan gacmahooda iyo aqoon isweydaarsiyo isdhaxgal ah iyo barnaamijyo dadweyne oo loogu talagalay ardayda dhigata dugsiga sare iyo QUT shahaadada koowaad iyo tan jaamacadeed Bilaash
Matxafka MacArthur, Heerka 8, MacArthur Chambers, 201 Edward Street,. Tu Th Su 10 AM-3PM. Matxafkani wuxuu fadhiyaa wixii jiray Dagaalkii Labaad ee Adduunka Xafiiska General Douglas MacArthur. Ku soo noqo waqti ka hor bilowgii 1940-kii madxafkan weyn ee Brisbane. Dadka waaweyn $ 8, Waayeelka $ 5, Ilmaha $ 4. (la cusbooneysiiyay Jan 2016)
Matxafka Brisbane, Heerka 3, Hoolka Magaalada Brisbane. Maalin kasta 10 AM-5PM. Waxay ka kooban tahay hal dabaq oo ah bandhigyo ku saabsan taariikhda magaalada, iyo dabaq kale oo lagu soo bandhigo farshaxanleyda maxalliga ah. Bilaash
Matxafka Badda ee Queensland, Cnr Stanley iyo Wadooyinka Sidon, South Brisbane,. Maalin kasta 9:30 AM ilaa 4:30 PM. Matxafka Badda ee Queensland wuxuu martigaliyaa bandhigyo iyo maraakiib farabadan Matxafkooda Koonfurta Bank. Ka gudub markabka HMAS Diamantina oo waayo aragnimo u leh sidii Badmaaxe Navy ah. Sidoo kale hubi inaad aragto Ella's Pink Lady, doonyaha yar yar ee loo yaqaan 'Queenslander Jessica Watson' ayaa solo dhoofay iyada oo aan cidna la caawin intii ay ku jirtay safkeedii rikoodhka jebinta si ay u noqoto qofkii ugu da'da yaraa ee keli socod ku mara adduunka. Dadka waaweyn $ 16, Lacag dhimista $ 14, Ilmo $ 7. (la cusbooneysiiyay Jan 2016)
Sir Thomas Brisbane Planetarium, Brisbane Botanic Gardens - Mt Coot-tha,. Kaladuwan Laga bilaabo 10AM maalmaha shaqada, laga bilaabo 11AM dhammaadka usbuuca. Waxay ku taalaa Brisbane Botanic Gardens subtropical qurux badan, Mt Coot-tha Road, Toowong. Ku fur Tu-Su adoo si bilaash ah ugu oggolaanaya cilmiga xiddigiska iyo bandhigyada iyo tiyaatar yar. Khidmadaha gelitaanka (guud ahaan $ 15.40 qofkiiba, oo qiimo dhimis loogu sameynayo qoysaska) ayaa lagu dabaqayaa Cosmic Skydome oo leh barnaamijyo kala duwan oo cilmiga xiddigiska iyo meelaha bannaan ah. Dhammaan bandhigyada waxay muujinayaan qayb "nool" oo dib u cusbooneysiineysa cirka habeenkii Brisbane. Maalmaha shaqada (M oo xiran iyo ciidaha guud), albaabada waxay furanyihiin 10ka subaxnimo iyadoo iskuuladu muujiyaan 10:30 AM iyo duhur. Xubnaha dadweynaha waxaa lagu soo dhaweynayaa inay kaqeyb galaan bandhigyadii hore ee iskuulka markii la ogolyahay boosaska (caruurtu waa inay ahaadaan da'da iskuulka). Kulamada 1:30 PM iyo 3PM (Tu-F) waa barnaamijyo dadweyne, in kasta oo barnaamijka 1:30 PM laga dalban karo barnaamijyo iskuul oo heersare ah (fadlan kafiiri Xafiiska Boos celinta ee Planetarium). Inta lagu jiro fasaxyada iskuulka Queensland waxaa jira bandhigyo guud oo dheeri ah maalmaha shaqada. Sabtiyada iyo Axadaha, Planetarium-ka wuxuu furmayaa 11AM waxaana bandhigyada sidoo kale la soo bandhigayaa habeenka Sabtida iyadoo "Sabtida Habeenkii Sabtida" at 6PM ay tahay bandhig caan ah. Waxaa ku yaal dukaan ay ku yaalliin badeecooyin kala duwan oo saynisyahanno / saynis ah iyo xusuusyo. Waxaa jira baarkin bilaash ah, boosteejo basaska ku dhow iyo maqaaxi / maqaaxi gooni ah. Jardiinooyinka dhirta leh waxay leeyihiin socod badan. Dadka waaweyn $ 15.40, Ilmo $ 9.40, Lacag dhimis $ 13.
Matxafka Queensland, Wadada Cagaarka iyo Wadooyinka Melbourne, Bangiga Koonfurta,. 9:30 AM - 5:00 PM. Matxafka Queensland waa matxaf weyn oo leh dhowr bandhig oo guud ahaan diiradda saara Taariikhda Dabiiciga ah iyo Taariikhda Queensland. Bilaash, marka laga reebo qaar ka mid ah bandhigyo gaar ah. (la cusbooneysiiyay Jan 2016)
ScienCentre, Geeska Grey iyo Melbourne Streets, South Bank,. 9:30 AM - 5:00 PM. Samaynta qayb ka mid ah Deegaanka Dhaqanka oo ku yaal heerarka hoose ee Madxafka Queensland ee dhisidda ScienCentre waa gacmo ku yaal, xarunta sayniska is -dhexgalka gaar ahaan qoysaska iyo carruurta. Qaangaarka $ 14.50, Lacag -dhimista $ 12.50, Ilmaha $ 11.50. (la cusbooneysiiyay Jan 2016)
Gallery Farshaxanka Queensland, Stanley Place, Bangiga Koonfurta,. 10:00 AM - 5:00 PM. Matxafka Farshaxanka ee Queensland wuxuu ku yaal laba dhisme oo ku dhex yaal Brisbane's Cultural Precinct ee Koonfurta Bank. Bilaash, marka laga reebo qaar ka mid ah bandhigyo gaar ah. (la cusbooneysiiyay Jan 2016)
Gallery of Farshaxanka casriga ah. Sawirka Farshaxanka Casriga ahi wuxuu ka kooban yahay qayb ka mid ah Farshaxanka Farshaxanka ee Queensland waana wax yar oo ka socda Xarunta Gawaarida. Waxaa la furay sanadkii 2006 galleelku wuxuu si joogto ah u marti galiyaa bandhigyo ay ka muuqdaan farshaxanno caalami ah oo caan ah (sida Warhol iyo Picasso) iyo sidoo kale farshaxanno badan oo maxalli ah. (la cusbooneysiiyay Jan 2016)
Dabeecadda iyo duurjoogta ee Brisbane
Kangaroos oo ku yaal Lone Pine Koala Sanctuary
Jardiinooyinka Botaniga Magaalada (10-15min socod ka socda bartamaha magaalada iyo saldhigyada tareenka ee Bartamaha ama Roma). 24/7. Safarro lagu hago 1-saac oo bilaash ah M-Sa 11AM iyo 1PM (looma baahna in hore loo sii ballansado). Jidadka socodka iyo baaskiilka. Bandhigyo. Booqashooyinka bilaashka ah waa isku dhafka taariikhda jardiinooyinka iyo magaalada halka booqashooyinka beerta ee Mt Coot-tha ay aad ugu foogan yihiin noocyada kala duwan ee dhirta. Bilaash.
Sanctuary Lone Pine Koala, 708 Jesmond Road, Pocket Tree Pocket (oo loo maro Western Freeway),. 9 AM-5PM. Saacadaha la dhimay Abriil 25 .. Meesha ugu horreysa uguna weyn adduunka, oo leh in ka badan 130 koalas. Cuddle a koala, gacanta ku cun kangaroos oo arag qaar ka mid ah duurjoogta Aussie. Gelitaanka $ 32 dadka waaweyn, $ 21 carruur ah 3-13yr, oo qiimo-dhimis loogu sameynayo qoysaska iyo ardayda. Fursadaha kale ee gaadiidka waxaa ka mid ah: Kaxee basaska magaalada saacaddiiba 445 ama 430 ama doonta Mirimar ee ka socota Koonfurta Bangiga 10:20. Dadka waaweyn $ 36, Ilmo $ 22, Lacag dhimis $ 24. Qiimaha qoyska ee la heli karo. Qiimo-dhimis haddii horay looga sii iibsaday khadka tooska ah.
Mt Coot-tha, Sir Samuel Griffiths Drive. Buurta Brisbane ee ugu dheer. Meel caan ah oo lagu qurxiyo oo leh aragti weyn iyo makhaayad iyo makhaayad wanaagsan laakiin qiimo jaban. TV-yada waaweyn iyo anteenooyinkooda raadiyaha ayaa dahaadhan qaar ka mid ah meelaha ugu sarreeya. Waad ku raaci kartaa waddo muuqaal dabiici ah adoo u maraya Mount Coot-tha Reserve aad u kayn badan si aad u aragto aragtida ku dhow-360 ° ee Brisbane iyo gobolka ku xeeran. Buurtu waxay 287 m (941 ft) ka sarreysaa heerka badda waxayna ka samaysan tahay xadka bari ee Taylor Range, waana qaybta ugu woqooyiga Australia ee diiwaangelisa barafka. Waa astaan ​​caan ah oo qiyaastii 6 km (4 mi) dhanka galbeed ka xigta degmada ganacsiga dhexe ee Brisbane waxaana laga arkaa inta badan magaalada. Kahor heshiiskii ciqaabta Moreton Bay, Mount Coot-tha wuxuu ahaa guriga dadka Aborijiniska ee Turrbal. Dadkii hore ee Brisbane waxay ugu yeereen One Tree Hill markii baadiyaha ku yaal buurta dusheeda la nadiifiyey marka laga reebo hal geed oo weyn oo eucalypt ah. Dadka Aborijiniska ah ee aagga waxay u imaan jireen buurta si ay u soo ururiyaan 'ku-ta' (malab) oo ay soo saartay shinnida asliga ah ee bilaa digaagga ah. Mount Coot-tha (Meel Malab ah), oo ka soo jeeda (ereyga asaliga ah), ayaa beddelay cinwaankii hore ee 'One Tree Hill' sanadkii 1880 markii aagga lagu dhawaaqay inuu yahay Keyd Madadaalo Dadweyne. Gaari waa habka ugu wax ku oolsan ee loogu raaxeysto Mount Cootha xawaarahaaga. Waxaa jira baarkin ballaaran oo meesha ugu sarreysa ah. Mid ayaa sidoo kale ka soo raaci kara raadadka calaamadeysan buurta dusheeda. Eeg mid ka mid ah aragtida ugu wanaagsan ee Brisbane. Waxaa ugufiican inaad timaado wax yar kahor fiidka ama waaga si aad ugu raaxeysato kala guurka maalinba habeenka. U kaxee meesha ugu sarreysa ee casho sharaf ah oo aad u bogaadiso aragtiyaha. Waxaa jira dhowr waddo oo socod ah oo dhex mara kaymaha ku wareegsan shir-madaxeedka; qaarbaa adag. Waa meel aad u wanaagsan oo laga daawan karo rashka Wabiga ee bisha Sebtember.
Marka laga reebo jardiinooyinka iyo meelaha lagu caweeyo, Brisbane's parklands, sida Roma Street Parklands, City Botanical Gardens iyo Mt Coot-tha waa meelo aad u wanaagsan oo laga helo duurjoogta sida bahalkaan biyo galinta Australiya, roobaadka midabada badan leh, dawacooyinka duulaya
Beerta Beerta Cusub. Beertan taariikhiga ah waxay caan ku tahay safka dheer ee geedaha jacaranda, meelaha harta iyo meelaha caanka ah ee ay ka kooban yihiin boqollaal nooc oo ubaxeedyo ah, iyo in ka badan 40,000 oo geed.
Roma Street Parklands. Waa beerta ugu weyn adduunka ee ku taal badhtamaha magaalada oo hoy u ah 1,800 nooc oo dhir u gaar ah. Khibrad u yeelo jardiinooyinka mawduucyada sida maze topiary, socodka kaynta roobka, harada, sharciga dabbaaldegga iyo amphitheater -ka oo leh farshaxanno dadweyne oo badan oo la majeerto. Bilaash.
Brisbane Botanic Gardens, Wadada Mt Coot-tha. 8:00 AM - 5:30 PM (Sebtember - Maarso); 8:00 AM - 5:00 PM (Abriil - Ogast). Bilaash (la cusbooneysiiyay Jan 2016)
Qodobbada kale ee xiisaha leh
Doonta Ragga Manly. Manly Boat Harbor waa marinka ugu dhow ee laga helo Moreton Bay Marine Park oo leh marin biyoodyo wanaagsan iyo jasiirado xiiso leh. Waxa ku xigta dekedda Manly Harbor Village, oo leh noocyo badan oo cunno iyo xulashooyin adeegsi ah oo fiirinaya marinada.
South Bank iyo Deegaanka Dhaqanka. Goobtii hore ee World Expo '88, horumarkan dhawaanahan wuxuu ka socdaa Wabiga Brisbane oo ka soo jeeda bartamaha magaalada wuxuuna ka kooban yahay xeeb macmal ah oo ay ku hareereysan yihiin dhul baaxad leh. Sidoo kale South Bank waxaa ku yaal dukaamada, kafateeriyada, maqaayadaha iyo shineemooyinka agagaarka Gray Street. Meel fiican oo lagu kulmo maalin kulul oo lagu dabaasho lacag la’aan. Agagaarka Bangiga Koonfurta Xarunta Dhaqanka waxaa ka mid ah Xarunta Farshaxanka ee Queensland, Madxafka Queensland iyo ScienCentre, Queensland Art Gallery, Gallery of Modern Art (GoMA) iyo Maktabadda Dawladda ee Queensland. Xarunta Griffith ee South Bank Campus oo ay ku jiraan Queensland Conservatorium iyo Kulliyadda Farshaxanka ee Queensland ayaa iyana ku yaal Gray St.
Suncorp Piazza. Bangiga Koonfurta dhexdiisa inta badan wuxuu marti geliyaa dhacdooyin toos ah iyo filimmo bilaash ah.
Hawlaha iyo safarada
Fuulid la hago oo ku taal Buundada sheekada caanka ah waa ikhtiyaar xusuus leh oo lagu soo maro magaalada
Barta Kangaroo. Darbiyada ku teedsan Wris Brisbane waa goob caan ah oo loogu talagalay fuulista dhagaxa waxayna si fiican u siisaa muuqaalka kore ee CBD ee wabiga oo dhan mara. Hawluhu waxay soconayaan ka dib mugdiga kadib, marka darbiyadu si fiican u iftiimayaan. Fasallada dhaadheer iyo fuulitaanka dhagaxa buuraha leh macallin waxaa laga heli karaa Riverlife Adventures, iyo sidoo kale kayak, laad-baaskiil, rootilaabde iyo kiro baaskiil. Waxa kale oo jira aagagga hilibka lagu dubto iyo meelaha lagu dalxiis tago.
Fuulitaanka Buundada Sheekada Bridge, lacag-la'aan: 1300 254 627. Waxay bixisaa fursad aad ku cabirto korka buundada caanka ah ee Brisbane. Waxaad ku raaxeysan kartaa aragtida 360 ° ee Brisbane, safafka buuraha iyo Jasiiradaha Moreton Bay goor barqo ah, galab ama habeen ah.
Jan Powers Beeraleyda Suuqyada. Ka iibso miro cusub, khudaar iyo hilib ka mid ah suuqyada beeralayda badan ee ku baahsan Brisbane oo ay ku jiraan Powerhouse ee New Farm, Manly, Mitchelton iyo suuqa ugu cusub ee Reddacliff Place ee ku yaal dusha sare ee Queen Street Mall.
Baalashka Brisbane,. Waxaad kuheli kartaa aragti cirka ah markaad dul sabaynayso Brisbane hawo kulul oo buufin. Badanaa waa suurtagal in la arko meel fog sida buuraha quruxda badan ee loo yaqaan 'Glasshouse Mountains', ilaa Gold Coast iyo jasiiradaha Moreton Bay.
Kookaburra Queen River Cruises. Kookaburra Queen labada uumeeye ee nooca Mississippi-ka ah ayaa ah muuqaal guud oo socdaal iyo qulqulo webiga Brisbane qadad iyo casho dalxiis. Labada markabba waxaa loo dhisay Bandhigii Adduunka ee 1988. Doomaha doontu waxay ka baxaan Eagle Street fuula CBD, waana hab nasasho leh oo lagu raaxeysto indhaha magaalada.
Cruise Wabiga Brisbane. Waxaa jira shirkado kala duwan oo bixiya maraakiib dalxiis oo kala duwan iyo dalxiisyo si aad indhaha ugu qabato. Kuwaas waxaa ka mid ah dalxiisyada loo tago Lone Pine Koala Sanctuary, iyo BrisVegas oo lagu caweeyo.
Baadh Brisbane's Moreton Bay iyo Jasiiradaha. 25 km (16 mi) oo ka socota Brisbane's CBD wuxuuna ka baxaa Jasiiradda Bribie ilaa Koonfurta Bay Islands. Ku raaxayso carbinta carrada, wadista 4-taayir, quusitaanka ama quusidda ama tag daawashada badda oo ku arag qoolleyda, dolphins, dugongs iyo nibiriyada.
Dam Wivenhoe. Koalas baro, dabaalan, shiraac ama kayak harada Lake Wivenhoe. Waxaa ku yaal xarumo BBQ, goobo lagu ciyaaro iyo baarkinno badan.
Xeebta Woorim. Ka kaxee buundada ka durugsan dhulweynaha si aad u aragto jardiinada quruxda badan ee Australiya. Kireyso doon kalluumeysi, booqo Woorim Beach oo keli ah oo leh aragtiyo Jasiiradda Moreton ama aad mid ka mid ah dhowr dalxiis oo la heli karo.
Baadh Waddanka Weyn ee Brisbane. Safar maalin ah ugu qaado gobollada ku xeeran qiyaastii saacad magaalada Brisbane oo soo hel khamriyo, jardiinooyin qaran, harooyin iyo waddan ku nool. Muuqaalka Muuqaalka oo ay ka mid yihiin Ipswich, Beaudesert iyo Boonah waa gobol ballaadhan oo buuro ah, keymo roob iyo dooxooyin isku soo duway lama-filaanka Hiddaha Adduunka ee McPherson Range. Dooxada Lockyer waxay bixisaa isku-dhafnaan kaamil ah oo ku nool magaalada iyo waddanka, oo leh waayo-aragnimo u dhexeeya safarro hagitaan ah iyo kaamam ku wareegsan hawo kulul iyo cirka-quusin.
Cirifka Muuqaalka. Tani waxay sharraxeysaa buurta weyn ee buuraha, dhererkeedu yahay 1,375 m (4,511 ft), laga bilaabo Qiyaasta Khaladka (koonfurta Gatton) ee ku teedsan Main (Kala Qaybsanaanta Weyn) ilaa MacPherson Range ee ku eg Currumbin ee Gold Coast. Marka laga reebo meelo caan ah oo ku yaal Rim, sida Binna Burra iyo O'Reilleys guryaha martida, Springbrook iyo Cunningham's Gap, saamiga ugu badan ee safafadani waa kuwo aan la shaacin oo intiisa badani ku dhow-cidlada. Meelo badan oo keyn ah ayaa horay loo soo galiyay, laakiin dib u soo kabashada kaynta ayaa ahayd mid aad u fiican, oo gebi ahaanba jidadkii geedaha la gooyay ayaa la waayay marka laga reebo kuwa weli loo adeegsaday marin-u-helka. Goobaha aan horay u soo sheegnay, dariiqooyinka darajooyinku waxay bixiyaan dhadhan, laakiin kuwa aadka u xiisaha badan waxaa jira fursado badan oo tamashleyn ah laga bilaabo safarada maalinlaha ah ilaa jimicsiyo dhowr maalmood soconaya. Macluumaad dheeraad ah ayaa laga heli karaa shabakadda. Socdaalleyda waa inay si habboon u diyaargaroobaan oo ay la sheekaystaan ​​hagidda waddanka adag iyo xeerarka Jardiinooyinka Qaranka.
Xarunta Dalxiiska Biyaha. Dhacdooyinka webiga Brisbane. Kayaking, abseiling the Kangaroo Cliffs, fadhi isbadal iyo kiro baaskiil. Waxay sidoo kale abaabulaan waxqabadyo fiidkii ah sida Kayak paddle iyo prawn.
Khasnadda Casino, 130 William St,. 24/7. Casaan buuxa oo buuxa oo leh noocyo kala duwan oo naadi ah iyo ciyaaro miis ah, oo ku yaal dhisme qarnigii 19-aad. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Waad ku mahadsan tahay Brisbane sanadka oo dhan jawiga cajiibka ah, waa magaalada ku habboon in lagu qabto dhacdooyinka bannaanka. Magaaladu inta badan waxay martigelisaa xaflado dhaqameed iyo taariikhi ah, xaflado muusig iyo madadaalo qoys, gaar ahaan bilaha xagaaga ee bilaha Diseembar, Janaayo iyo Febraayo.
Dhaqan iyo mid taariikhi ah
Brisbane Festival Riverfire dhacdooyinka rashka ee Bridge Bridge
Bandhigga Brisbane. Ilaa hadda dhacdada ugu weyn uguna caansan Brisbane. Waxaa la qabtaa sanad walba dhamaadka bisha Sebtember. Bandhiggan, oo u bilaabmay dabaaldegga Wabiga Brisbane, ayaa hadda ku jira dhowr dhacdooyin oo yaryar oo ka dhacay meelo kala duwan oo ku wareegsan South Bank Parklands, Xarunta Dhaqanka iyo CBD oo ah dabaaldega Brisbane lafteeda. Xusid ahaan, dhacdada 'Wabiga Dabka' oo lagu qabto Bangiga Koonfurta Sebteembar kasta ayaa soo jiita dadka ugu badan. Waxay bixisaa madadaalo qoys oo bilaash ah maalinta oo dhan iyo rashka ugu weyn magaalada ee habeenkii lagu soo bandhigo.
Ekka (Bandhigga Royal Queensland). Dhacdo aasaasi ah oo taariikhda iyo dhaqanka Brisbane ah, oo la qabtay bil kasta oo Ogosto taariikhdeeda oo ku beegan 1876. Waxaa lagu martigaliyaa RNA Showgrounds oo ku yaal xaafadda hoose ee Bowen Hills waxayna socotaa muddo toddobaad ah, halkaas oo Arbacadu tahay maalin fasax dadweyne ah (sidaa darteed filo dad badan maalintan). Ugu horreyntii waxaa loo suuq geeyay qoysaska, meelaha loo dalxiis tago ee Ekka waxaa ka mid ah safarro dhulka loo maro, Side Show Alley, bandhigyo xayawaan ah, tartamo jarista alwaaxda, bandhigyada beeraha, dhacdooyinka fardaha iyo Bandhigyada Bandhigyada, oo badanaa ku jira agabyada cuntada (sida macmacaanka) iyo waxyaabaha cusub. Haddii aad ku sugan tahay Brissy waqtigaas, runti maahan in la seego!
Xafladda Paniyiri. Dabaaldeg dhaqameed Griig ah oo ay qabteen Brisbane dad badan oo Griig ah. Dhacdo madadaalo qoys oo caan ah, oo bixisa cunnooyin Greek iyo madadaalo sax ah. Beerta Musgrave.
Bandhigga Filimka Brisbane Asia Pacific (BAPFF) (Markii hore loo yiqiin Brisbane International Film Festival (BIFF)). Wuxuu bilaabmaa Nofeembar waxaana lagu martigaliyaa goobo shineemo oo badan Brisbane. Bandhigu wuxuu soo bandhigayaa filimaan cusub iyo dib-u-eegis ay sameeyaan filim sameeyeyaasha gudaha iyo kuwa caalamiga ah oo ay weheliso siminaaro iyo abaalmarinno.
Sannad kasta, Brisbane waxay sidoo kale martigelisaa dhowr bandhig oo dhex mara bartamaha magaalada. Kuwani waxay sameyn karaan fursado sawir wanaagsan, waxaana ka mid ah:
Maalinta St Patrick. Parade Sabtida ugu dhow Maarso 17
Maalinta ANZAC. Parade wuxuu bilaabmayaa 10AM Abriil 25.
Maalinta Maajo Maarso. Isku soo bax balaaran oo ay ka qeyb galayaan ururada shaqaalaha maxaliga Axada ugu horeysa bisha May.
Socodka Zombie. Munaasabad sanadle ah oo dhaqaale loogu ururinayo iyo wacyi galinta Brain Foundation. Axada Koowaad Oktoobar.
Kirismaska ​​Kirismaska ​​iyo Pantomime. Habeen kasta laga bilaabo horraanta Diseembar illaa Kirismaska, xarunta bartamaha magaalada ee loo yaqaan 'Queen Street' ee ay ku lugeeyaan waxaa la wareegaya albaabaro, sheeko xariirooyin sugerplum, geel nool iyo orso weyn oo xamaali ah. Waa dhacdo caan ku ah qoysaska, gaar ahaan maalmaha fasaxa ah.
Brisbane's Fortitude Valley waxay leedahay meelaha ugu badan ee baararka, baararka iyo naadiyada meelkasta oo Australia ah iyo sanadkii 2005, waxaa lasiiyay aaggii ugu horreeyay uguna kaliya ee Australia ee "Meesha Madadaalada Madadaalada ah" ee Australia, taas oo ilaalisa isla markaana dhiirrigelisa goobta muusikada tooska ah. Sannadkii 2007, majaladda madadaalada ah ee caanka ah ee loo yaqaan 'Billboard magazine' ayaa ku magacawday Brisbane 5ta goobood ee adduunka ugu fiican muusikada tooska ah. Sannadkii 2010-kii ayay magaaladu furtay Buundada Go-Inta udhaxeysa, oo loogu magac daray kooxda caanka ah ee Brisbane indie rock band The Go-Betweens. Shaki kuma jiro in dadka deegaanka ay jecel yihiin muusikadooda oo habeen ka baxa Brisbane ma dhameystirna iyaga oo aan la kulmin qaar ka mid ah muusikada tooska ah ee la bixiyo. Haddii aad raadineyso waxa ka dhacaya Brisbane, dukaamada muusikada iyo madadaalada badankood iyo sidoo kale maqaayadaha qaarkood iyo makhaayadaha qaarkood waxay bixiyaan joornaallo madadaalo oo bilaash ah oo liis garaya waxa soo socda bisha xigta ama ku dhow.
In kasta oo laga yaabo inaad hesho fannaaniin badan oo ka ciyaara baararka iyo naadiyada ku xeeran CBD, West End iyo Dooxada, waxaa jira goobo gaar ah oo loogu talagalay gaar ahaan kooxaha martigelinaya ama farshaxanada ku jira safarada rasmiga ah. Dhacdooyinka qaarkood waxay u oggolaanayaan in ka yar 18-ka sano, laakiin dhammaantood maahan, sidaas darteed waxaa ugu wanaagsan in horay loo sii hubiyo.
Guriga Muusikada ee Max Watt, 125 Boundary St. Funky, oo ujeeddo loo dhisay goob show toos ah oo ku taal bartamaha West End.
Tivoli, 52 Costin St. Waxay leedahay degenaan aad u dabacsan, qaab noir u qaabeysan oo leh dabaq aad u weyn iyo mezzanine. Goob si heer sare ah loo qiimeeyay oo udhaxeysa dadka deegaanka iyo socod 10 daqiiqo oo kaliya ah oo ka socda Dooxada.
Xayawaanka Xayawaanka, 711 Ann St. - Waxay ku taal Dooxada, goobtan muusikada tooska ah waxay ugu dhowdahay Brisbane ka badan wabiga. Dhagaxa 'Indie rock', 'hipsters' iyo vibe-ka kale.
The Dooxada Fiesta waa dhacdo sedex maalmood socotaa. Waxaa bilaabay Brisbane Suuqgeyn si loogu dhiirrigeliyo Fortitude Valley oo xarun u ah farshaxanka iyo dhaqanka dhalinyarada. Waxaa ku jira muusig toos ah oo toos ah, meheradaha suuqa, cuntada iyo cabitaanka laga helo maqaaxiyo badan oo makhaayado iyo makhaayado laga helo, iyo madadaalo kale.
Brisbane iyo Gold Coast sidoo kale waxay marti u yihiin dhowr xafladood oo elektaroonik ah iyo muusigga dhagaxa weyn, oo inta badan loogu talagalay dadka da'da yar.
Daawasho ama kaqeybgal, Brisbane waxay leedahay dhacdooyin badan oo isboorti oo badan. Waxaa loo doortay mid ka mid ah garoomada ugu wanaagsan Australia, Suncorp Stadium waxaa marti u ah kooxaha Brisbane Broncos NRL iyo Queensland Reds Rugby Union xilliga qaboobaha, iyo Brisbane Roar Football (Soccer) Club xagaaga. Dhacdooyinka kale sida NRL State of Origin sidoo kale waa kaar-aad u weyn. Ciyaaraha badankood waxay udhaxeeyaan $ 25-40 qof weyn.
Dhinaca koonfureed ee magaalada Woolloongabba waa Brisbane Cricket Ground, oo badanaa loo yaqaan Gabba. Halkaan, kooxda Brisbane Lions AFL waxay ciyaaraan xilliga qaboobaha, dhammaan noocyada cricket-ka waxaa laga daawan karaa xagaaga.
Dhowr jaamacadood ayaa wac Brisbane guriga waxaana jira fursado muhiim ah oo loogu talagalay ardayda caalamiga ah inay isku qoraan barnaamijyada shahaadada. Kuwa badan oo ka mid ahi waxay heshiisyo is-dhaafsi la leeyihiin dhowr jaamacadood oo ajnabi ah
Jaamacadda Queensland (UQ) waa jaamacadda ugu da'da weyn magaalada Queensland, waana midda ugu sharafta badan, iyada oo xubin ka ah Kooxda Sideedaad, oo ah isbahaysi hogaaminaya jaamacadaha Australia, kuna xeel dheer cilmibaarista iyo dhammeystirka guud iyo waxbarashada xirfadeed. UQ waxay ku leedahay xarunteeda ugu weyn xaafada Brisbane ee St. Lucia, iyo xarumo kale oo yar yar oo ku yaal Ipswich, Gatton iyo Herston, iyo tas-hiilaadka dayax gacmeedyada oo ku baahsan Queensland.
Jaamacadda Queensland ee Farsamada (QUT) waa jaamacad kale oo weyn oo kutaala magaalada Brisbane, iyadoo xooga lasaarayo cilmi baarista iyo waxbarida ficilka ah, oo loo sameeyay iskudubarid dhowr ah kuliyado farsamo oo kaladuwan. Waxay sidoo kale ka mid tahay jaamacadaha Australia. Xarunta weyn waxay ku taal Gardens Point, oo ku taal bartamaha Brisbane CBD, iyo xarumo kale oo ku yaal Kelvin Grove, Carseldine iyo Caboolture.
Jaamacadda Griffith (oo si fudud loogu gudbiyo sida Griffith dadka maxalliga ah) waa jaamacadda kale ee weyn ee ku taal Brisbane, iyada oo diiradda la saarayo shahaadooyin hal abuur leh, laakiin waxay bixisaa qaar badan oo ka mid ah shahaadooyinka aad ka qaban karto jaamacadaha kale. Jaamacadu waxay leedahay xarumo dhowr ah oo ku yaal xaafadaha Brisbane oo ay ku jiraan South Bank, Mount Gravatt iyo Nathan, oo leh laba xarumood oo kale oo ku yaal Logan City iyo Gold Coast.
Xusuusnow saacadaha wax iibsiga ee Brisbane ka hor intaadan ka bixin dukaamaysiga Magaalada. Dukaamaysiga habeenka dambe waa fiidnimadii Khamiista ee xaafadaha, iyo fiidkii Jimcaha ee Xarunta Sydney. Habeennada kale, filo dukaamada badankood inay xirmaan 5PM.
Mall Street Street. Xarunta weyn ee dukaamaysiga ee Brisbane, dukaamo badan oo kala duwan, waxaa ku yaal dhowr Xarumood oo wax laga iibsado.
Xarunta Myer. Waxay ka socotaa ciyaarta dukaamada jiiniska ilaa dukaamada mindiyaha qaaska ah. Dukaamada internetka waa la heli karaa.
Jiilaalka. Xarunta Fashion -ku waxay ku xidhan tahay lugta Hotel Hilton. Sidoo kale waxaa ku jira luuqad bowling maalin ama habeen shati leh.
QueensPlaza. Xarunta moodada cusub ee Brisbane, oo leh qaali, dukaamo waaweyn oo summad leh.
Wadada weyn ee ku taal Suuqa. Dhar badan oo rasmi ah, dharka fiidkii iyo dukaamada caruusadda. Sidoo kale dukaamada qaar oo keydiya naqshadeeyayaasha moodada caanka ah ee Brisbane sida Gail Sorronda. Waxaa ku yaal barxadda cuntada ee dabaqa hoose iyo tafaariiqda korantada iyo qalabka.
Brisbane Arcade. Dukaan cariiri ah oo cariiri ah oo loo maro marinka u dhexeeya Adelaide iyo Queen St. Waxay ka kooban tahay dukaamo badan oo u gaar ah. Tani waa mid ka mid ah haaddooyinka yar yar ee ka haray dukaamaysiga magaalada Brisbane.
Dhismaha Queen Adelaide. Mid ka mid ah dhismooyinka ugu da'da weyn Brisbane wuxuu hoy u yahay dukaanka caanka ah ee loo yaqaan 'Queensland' ee Sportsgirl, Adidas iyo Rebel Sport.
Khasnajiga Brisbane (Khasnadda Conrad Treasury) (oo ku taal dhammaadka waddada George Street).
Wadada Adelaide. Wareegga labiska magaalada
Wadada Elizabeth Street. Arcade oo u dhexeysa waddooyinka Elizabeth iyo Charlotte. Qaar badan oo ka mid ah dukaamo madax banaan oo ku habboon qiimaha kala duwan, iyo raashin badan oo Aasiya ah.
Wadada Albert. Waxay leedahay tacabiiro badan iyo dukaamo nooca ciyaaraha ah, dukaamo buugag badan.
Wadada Eagle. Xarunta sharciga iyo maaliyadda ee Queensland, waxay haysaa suuqyada Eagle Street iyo Riverside.
Wadada Edward. Badanaa waxaa daboolaya dukaamada Queens Plaza, MacArthur Central iyo Wintergarden Street fashion. Waxaa sidoo kale jira dhowr dahab, makhaayado laga qaado, baarar iyo naadiyo habeenkii. Edward St. waxaa loo beddelay goob magac raaxo leh, oo leh dukaanno ay ka mid yihiin MaxMara, Tiffany & Co., Louis Vuitton, Cartier, Bulgari, Bally, Mont Blanc, Chanel, Gucci, Hugo Boss, Oroton, Ralph Lauren, L'Occitane , iyo Hermes. Apple waxay ka furtay bakhaarka ay leedahay ee Brisbane dukaanka qaab-dhismeedka MacArthur Chambers, (oo u dhaqmay sidii xaruntii guud ee US General Douglas MacArthur ee Dagaalkii Labaad ee Adduunka), waxayna la mid tahay dib-u-cusboonaysiinta dhismaha kale ee Apple ee London, Paris, Amsterdam iyo Berlin. Dukaanka Brisbane ee MacArthur Chambers ayaa ka mid noqday kuwa ugu fiican. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Suuqyada Bangiga Koonfurta. Waxaa lagu qabtaa South Bank Parklands Axad walba.
Mall Brunswick Street Mall. Waxay ku yaalliin bartamaha magaalada China Town, waxaa jira tafaariiqleyaal badan oo Shiineys ah, maqaayado cunnada lagu kariyo, makhaayado iyo baarar. Suuqyadu waa shaqeeyaan Axadaha.
Xarunta Dukaameysiga Indooroopilly (322 Moggill Road),. Xarunta wax -iibsiga ee weyn ayaa ku fidday saddex heer oo aad u waaweyn. Tafaariiqleyaal badan oo kala duwan.
Westfield Garden City, Waddooyinka Logan iyo Kessels, Upper Mt Gravatt,. Xarunta dukaamaysiga oo leh laba heer. Waxa ku jira noocyo kala duwan oo badan oo tafaariiqleyaal ah iyo dukaamada buugaagta. Qaybta cuntada dibadda ee ku salaysan agagaarka muuqaalka biyaha, taasi waa mashquul ilaa fiidkii.
Westfield Chermside, Geeska Gympie iyo Hamilton Roads, Chermside ,. Xarunta wax iibsiga ee ugu weyn Brisbane. Caan ka ah dhaqanka dhalinyarada ee Megaplex Movie Cinema.
Westfield Carindale, 1151 Creek Road, Carindale,. Xarunta ugu weyn ee laga dukaameysto ee Duleedka Bari.
Suuqa Ubax Northside, Cutubka 3, 27 Windorah St, Stafford. M-Sa.
Suuqa Davies Park, Wadada Montague, West End. Sa 6 AM-2PM. Suuq suuq-ballaadhan u eg oo beeraley leh jawi kale oo lagu iibiyo miro iyo khudrad, hilib, jiis, iyo farsamada gacanta. Sidoo kale waxay leeyihiin iibiyeyaal cunto, oo ay ku jiraan crêperie.
Wadada James, Dooxada Fortitude. Xadhig yar oo leh moodal heer sare ah, alaab guri iyo tafaariiq elektaroonig ah, oo lagu daray baararka wanaagsan iyo makhaayadaha.
Suuqyada Dooxada. Sa Su 8 AM-4PM. Dukaameysiga waa in loo sameeyaa dadka deegaanka iyo dalxiisayaasha. Ku shaqeynaya usbuuc kasta, raadi dahabka, qalabka gacmaha lagu sameeyo iyo farshaxan gacmeedyo. Hoyga naqshadayaasha moodooyinka soo baxaya.
Ann St.. Dhinacyada Ann Street ee Dooxada waxaa ku yaal dukaamo badan oo madaxbanaan oo casri ah oo loogu talogalay ka adeegashada bartamaha. Qaarkood waxay ku faafaan hareeraha geeska Waddada Brunswick sidoo kale.
Xagee joogaa Brisbane
Boorsooyinka Muuska Bender (Banana Benders), 118 Petrie Terrace, Brisbane (500m oo u jirta Roma St Transit Center),. Soo galid: 11AM, soo bixitaan: 10AM. Hoteel yar oo nadiif ah oo saaxiibtinimo ku yaal darafka Brisbane CBD. 10 daqiiqo ayaa looga socdaa Xarunta Gaadiidka Brisbane iyo socod fudud oo lagu tago South Bank & CBD. Waxay noqon kartaa wax yar oo xasilloon laakiin meel fiican oo lagu nasto oo lagula kulmo dad cusub. $ 25-75. (la cusbooneysiiyay Mar 2015)
Saldhigga Brisbane Central, 308 Edward St ,. Huteel weyn oo ku yaal waddada dhinaceeda Saldhigga Dhexe. Waxay ku taal dhinaca waayeelka, laakiin waxay leedahay jawi aad u xiiso badan, firfircoon oo da 'yar. Oo waxay ku habboon tahay Down Under Minibar (Khamriga waa laga saaray), Cuntada Xalaasha ah waxaa laga dalban karaa Makhaayadaha Xalaal ee u dhow. eHalal waa inay ku siisaa liis faahfaahsan makhaayadaha Xalaal ee u dhow guriga, si aadan ugu fogaan inaad guriga ku turunturooto. Waxay noqon kartaa mid qaylo iyo xisbi u janjeedha, laakiin waa meel fiican oo lagula kulmo dadka.
Saldhigga Brisbane Uptown (Tinbilly), 466 George St (cnr Herschel St; kasoo horjeedka Roma St Transit Center),. Qolal ballaadhan oo ballaaran, iyo qol wanaagsan / tas-hiilaad TV.
Dalxiiska Dalxiiska ee Brisbane, 110 Vulture St, West End ,. Ka-qaadis bilaash ah Xarunta gaadiidka ama gegida dayuuradaha, iyo bas bilaash ah oo ku socda kuna socda magaalada saacad kasta.
Boorsooyinka Magaalada Brisbane, 380 Upper Roma St (400m u jirta Roma St Transit Center),. Nadiifi, hoyga nasashada leh barkad iyo shaqaale saaxiibtinimo.
Magaalada Brisbane YHA, 392 Upper Roma St (600m oo udhaxeysa Roma St Transit Center),. Soo gal: 2PM, out-out: 10AM. Laga soo bilaabo $ 29.
Boorsooyinka Bangiyada, 11 Gipps St, Fortitude Valley,. Soo gal: 1PM, out-out: 10AM. Casri ah, nadiif ah, aad loo jecel yahay, barkadda dabaasha, iyo mid ka mid ah naadiyada habeenkii ee caanka ah (laakiin ka qaalisan) Brisbane, Birdee Num Num.
Daruur 9 Dalxiis Dalxiis, 350 Upper Roma St,. Beddel cusub, casri ah, beddel warshadeed.
miisaaniyada ibis garoonka diyaaradaha Brisbane, 18 Navigator Place, Cnr. Wadada Nudgee ,. Laga soo bilaabo $ 89. (la cusbooneysiiyay Jan 2016)
miisaaniyada ibis Windsor, Wadada 159 Lutwyche,. Laga soo bilaabo $ 74. (la cusbooneysiiyay Jan 2016)
Kingsford Inside Inn, 114 Kingsford Smith Drive, Hamilton,, lacag-la'aan: 1800 777 590. U dhow garoonka diyaaradaha. Dhowr daqiiqo 'ka soco Hoteelka Quraacda Creek. Hoyga waxaa laga heli karaa adeegyada gaadiidka guri-ka-guri. Laga soo bilaabo $ 99.
Boorsooyinka Manly Harbor, 45 Cambridge Parade, Ragga,. Waxay ku xigtaa badda dhexdeeda, oo ku taal hareeraha xeebta hoose. 20 min tareen ka raacida Brisbane CBD. Waxay abaabuli karaan nashaadaad sida dabaasha, bad maaxida, kalluumeysiga iyo quusitaanka. Qolalka hurdada iyo qolalka gaarka loo leeyahay, marinka internetka, garoonka diyaaradaha iyo wareejinta tareenka.
Meel Lagu Sii joogo Boorsooyinkooda hostel, 47 Brighton Road, Highgate Hill,, lacag-la'aan: 1800 812 398.
Hoteellada Brisbane waxay ku taxan yihiin sida xarfuhu isugu xigaan.
Hoteelka Adina Apartment ee Brisbane Anzac Square, 255 Ann St,. Soo gal: 2PM, out-out: 11PM. Hoteelka Adina Brisbane Anzac Square waa hudheel casri ah oo iska indhatira jardiinooyinka lagu xasuusto Anzac Square. Laga soo bilaabo $ 104. (la cusbooneysiiyay Jan 2016)
Guryaha Albion Manor iyo Motel, 402 Sandgate Road (Cnr Sandgate Road & Camden Street), Albion,, lacag-la'aan: 1800 247 447. Guri istuudiya oo waasac ah oo raaxo leh. Laga soo bilaabo $ 105.
Hoteelka Central Brunswick, 455 Brunswick Street, Fortitude Valley,, fax: + 61 7 3852-1015. Guryo waasac ah oo u dhow Chinatown una dhow agagaarka CBD ee magaalada hoose ee Brisbane.
Xulashada Huteelada - Guryaha Brisbane. Meelo badan oo ku yaal Brisbane oo ka baxsan aagga CBD-da ee u adeega hoy tayo leh qiimo jaban oo ka hooseeya magacyada EcnoLodge, Ascend, Tayada Inn iyo Raaxo Inn.
Afar Qodob oo uu qoray Sheraton, 99 Mary Street,. Soo gal: 3PM, out-out: 11AM. Laga soo bilaabo $ 129. (la cusbooneysiiyay Jan 2016)
Greenslopes Motor Inn ee Brisbane (Greenslopes), 389 Cornwall Street (Cnr Dansie St), Greenslopes,, lacag la'aan: 1 800 441 144, fax: + 61 7 3394-2936. 18 qol, marin fudud oo laga helo Wadada Baasifigga, baarkin fara badan oo wadada ka baxsan. Laga soo bilaabo $ 99. (la cusbooneysiiyay Jan 2016)
Hilton, 190 Elizabeth St,. Soo gal: 2PM, out-out: 11AM. Dulmaraya Queen Street Mall. Laga soo bilaabo $ 206. (la cusbooneysiiyay Jan 2016)
Hotel Grand Chancellor, 23 Leichhardt Street,. Soo gal: 2PM, out-out: 11AM. Laga soo bilaabo ku dhowaad $ 160. (la cusbooneysiiyay Jan 2016)
Hoteelka Jen, 159 Roma Street,. Soo gal: 2PM, out-out: 11AM. Laga soo bilaabo ku dhowaad $ 160. (la cusbooneysiiyay Jan 2016)
ibis Brisbane, 27-35 Turbot Street,. Soo gal: 2PM, out-out: 11AM. Laga soo bilaabo $ 139. (la cusbooneysiiyay Jan 2016)
Hotel Limes, 142 Constance St, Fortitude Valley,. Hoteel casri ah oo casri ah oo loogu talagalay Fortitude Valley oo leh saqafka sare iyo shineemo. 21 balakoon ama barxad (oo leh buudh). Jikada oo leh meel kursiga keydka lagu shaqeeyo, freewifi ama marin ballaadhan, iPod deked, 32inch telefishanka LCD iyo musqulaha L'Occitane. Adeegga wargeysyada maalinlaha ah iyo cabitaanka sharafta leh ee saqafka kore. Laga soo bilaabo $ 150.
Bangiga Mantra South, 161 Gray St, Bangiga Koonfurta,. Soo gal: 2PM, out-out: 10AM. Cusub, casri ah, buush ah oo aad u qurux badan. Laga soo bilaabo ku dhowaad $ 159. (la cusbooneysiiyay Jan 2016)
Marriott Hotel, 515 Boqoradda St,. Soo gal: 2PM, out-out: 11AM. Huteel raaxo leh oo leh shaqaale qurux badan. Laga soo bilaabo $ 163.
Mercure Brisbane, 85-87 North Quay,. Soo gal: 2PM, out-out: 11AM. Laga soo bilaabo $ 159. (la cusbooneysiiyay Jan 2016)
Mercure Brisbane King George Square, Wadooyinka Ann & Roma,. Soo gal: 2PM, out-out: 10:30 AM. Masaafada socodka ee xaafada wax laga iibsado ee Queen St Mall. Laga soo bilaabo $ 143. (la cusbooneysiiyay Jan 2016)
Garoonka diyaaradaha ee Novotel Brisbane, 6-8 Wareegtada, Madaarka Brisbane (Raac calaamadaha SkyGate),. Soo gal: 2PM, out-out: 11AM. Laga soo bilaabo $ 229. (la cusbooneysiiyay Jan 2016)
Novotel Brisbane, 200 Creek Street,. Soo gal: 2PM, out-out: 11AM. Laga soo bilaabo $ 159. (la cusbooneysiiyay Jan 2016)
Pullman Brisbane King George Square, Corner Ann & Roma Sts,. Soo gal: 2PM, out-out: 10:30 AM. Meel u jirta masaafada ay ku taalo boqoradda Stall Mall. Laga soo bilaabo $ 175. (la cusbooneysiiyay Jan 2016)
Raceways Motel ee Brisbane (Hamilton), 66 Kent St,. Soo gal: duhur. Hoy ay qoysku ku noolaadaan oo ku dhow Xarunta Magaalada Brisbane iyo Madaarka Caalamiga ah ee Brisbane. Laga soo bilaabo $ 129.
Hoteelka Weyn ee Koonfurta, 103 George St ,. Soo gal: 2PM, out-out: 11AM. Laga soo bilaabo $ 62. (la cusbooneysiiyay Jan 2016)
Ridge Hoteelka Leichhardt, 189 Leichhardt St, Spring Hill ,. Laga soo bilaabo $ 89.
Rydges South Bank Brisbane, 9 Glenelg St, South Bank,, lacag-la'aan: 1300 857 922. Soo gal: 2PM, out-out: 11AM. Bartamaha fanka iyo madadaalada Brisbane, waa hudheelka ugu dhow Xarunta Farshaxanka ee Queensland. Xarunta Shirka & Bandhigga ee Brisbane waxay isla markiiba ku dhowdahay hudheelka iyo badhtamaha magaalada Brisbane iyo tuulada bohemian ee West End ayaa 10 miridh u jirta. Laga soo bilaabo $ 169. (la cusbooneysiiyay Jan 2016)
Sebel Brisbane, Corner Charlotte iyo Albert St,. Soo gal: 2PM, out-out: 11AM. Qolalka qaab dhismeedka qurxinta ee gaarka ah. Laga soo bilaabo $ 159. (la cusbooneysiiyay Jan 2016)
Guryaha Sheeko, 89 Lambert St, Kangaroo Point,. Waxay bixisaa deganaansho-joog iyo joog-dheerba, waxayna u jirtaa dhowr daqiiqo doonta yar oo laga raaco CBD. Laga soo bilaabo $ 209.
iStay Webiga Magaalada, 79 Albert St,. Soo gal: 2PM, out-out: 10AM. Hoteelkani wuxuu bixiyaa Wi-Fi bilaash ah, marin barkadda lagu dabaasho iyo tas-hiilaadka jimicsiga oo ay weheliyaan 1 iyo 2 qol jiif oo leh aragtiyo. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Capri waxaa qoray Fraser Brisbane, 80 Albert Street,. Soo gal: 3PM, out-out: 11AM. Laga soo bilaabo ku dhowaad $ 180. (la cusbooneysiiyay Jan 2016)
Dooxada, 1000 Ann St,. Soo gal: 2PM, out-out: 11AM. Mid ka mid ah Brisbane ugu fiican, laakiin qiimaha dhamaadka sare. Qeyb ka mid ah dhismaha boqortooyada, hudheelku wuxuu leeyahay qaar ka mid ah qolalka ugu wanaagsan iyo meelaha lagu nasto iyo jimicsiyada ku yaal Brisbane. (la cusbooneysiiyay Jan 2016)
Quay West Suites Brisbane, 132 Alice St,. Soo gal: 2PM, out-out: 11AM. Ka soo horjeedka Brisbane Botantic Gardens, oo u dhow QUT iyo baarlamaanka Queensland. Laga soo bilaabo $ 209. (la cusbooneysiiyay Jan 2016)
Royal oo ku yaal Park Hotel, Waddooyinka Alice iyo Albert (geeska Alice iyo Albert Streets),. Baadhitaan: 11AM. Guryaha ugu wanaagsan ee Magaalada Brisbane ee iska indhatiraya Jardiinooyinka Magaalada Botanic iyo socod gaaban oo loo maro Brisbane farshaxankeeda iyo madadaalada. Laga soo bilaabo $ 169. (la cusbooneysiiyay Jan 2016)
Sofitel Brisbane Central, 249 Turbot Street,. Soo gal: 2PM, out-out: 11AM. Huteel raaxo leh oo ka sarreeya Saldhigga Dhexe ee Brisbane, oo fiirinaya Fagaaraha ANZAC. Laga soo bilaabo $ 194. (la cusbooneysiiyay Jan 2016)
Hoteelka xiga Brisbane, 72 Queen Street ,. Soo gal: 3PM, out-out: 11AM. Dib-u-habeyn lagu sameeyay dhammaadka 2014 hudheelkan dhammaadka leh wuxuu ku yaal Queen Street Mall Laga soo bilaabo qiyaastii. $ 190. (la cusbooneysiiyay Jan 2016)
Hotelka Cusub Inchcolm Iyo Suites Brisbane, 73 Wickham Terrace,. Baadhitaan: 11AM. Laga soo bilaabo $ 209. (la cusbooneysiiyay Jan 2016)
Hoteelka Hantidhowrka, 130 William Street ,. Soo gal: 2PM, out-out: 11AM. Qolal waaweyn oo ku yaal dhisme gumeysi hore oo ku yaal Xarunta CBD. Laga soo bilaabo qiyaastii $ 250.
Garoonka Stamford Plaza Brisbane, Geeska Margaret & Wadooyinka Edward ,. Soo gal: 2PM, out-out: 11AM. Laga soo bilaabo $ 250. (la cusbooneysiiyay Jan 2016)
Guryaha laga adeegto ee Brisbane
Terraces Bridgewater. Wadada Wharf, Kangaroo Point. Mudo daqiiqado ah gudahood markii la raaco terminalka doonta ee Holman Street, Bridgewater Terraces waxay ka kooban tahay hal, laba iyo seddex qol jiif oo iskood u kooban Barkadda weyn ee lagu cayaaro, hudheellada hudheelka, sawnada, qolka jimicsiga iyo goobaha wax lagu gado.
Ku raadinta Buundada Sheekada, 85 Deakin Street,. Barta Kangaroo. Studio, hal, labo iyo seddex qol jiif oo laga adeegto.
Guryaha Oaks Lexicon, lacag-la'aan: 1300 663 385. Soo gal: 2PM, out-out: 10AM. Ann Street, Magaalada Brisbane. Wadnaha CBD, wuxuu ku yaal dhisme casri ah oo leh 1 iyo 2 qol jiif. Xarumo iyo adeeg hudheel casri ah laakiin bixiya aqal iskaa wax u qabso ah. Daqiiqado u socda Mall Street Street, Riverside iyo Xarunta Shirka Brisbane.
Guryaha Evolution, Guryaha Evolution, 18 Tank St (oo u dhow Saldhigga Shinjuku),. Gudaha Brisbane CBD, si buuxda ayaa loogu adeegaa oo waxay siisaa qol warbaahineed, barkad dabaasha, sagxad leh BBQs iyo Xarun ganacsi.
Raadinta Woolloongabba, 130 Logan Waddo ,. Soo gal: 2PM, out-out: 10AM. Hoteelka qaabka Apartment ee dhawaan la dhisay lana furay 2014 Laga soo bilaabo $ 140. (la cusbooneysiiyay Jan 2016)
Oaks Aurora Tower, 420 Queen Street ,. Soo gal: 2PM, out-out: 10AM. Huteelkani wuxuu bixiyaa 1, 2 iyo 3 qol jiif oo leh webi iyo aragti magaalada, oo ku yaal meel u dhow Queens Street Mall iyo Eagles St Piers precinct. Waxay ka kooban yihiin hoolka madadaalada, barkadda 25m. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Isgaarsiinta magaalada Brisbane
Kafee Internetka ee ku yaal Brisbane
Golaha Magaalada Brisbane wuxuu hadda bixiyaa internet bilaash ah (Wi-Fi) bilaash ah 22 jardiinooyin iyo goobo caam ah oo ku baahsan Brisbane, iyo sidoo kale meelaha ku hareeraysan CBD oo ay ku jiraan Queen Street Mall, Reddacliff Place, Victoria Bridge, South Bank Parklands, Valley Malls, Mt Coot-tha Summit Lookout, Maktabadaha Brisbane iyo CityCats. Waxay noqon kartaa mid waxtar leh in la sameeyo emayl dhaqso ah, ama raadin macluumaad yar - laakiin waxqabadka wuxuu noqon karaa mid dhib badan.
Makhaayado badan iyo hudheelo badan ayaa bixiya Wi-Fi bilaash ah oo loogu talagalay macaamiisha, sida dukaamo badan oo wax laga iibsado. Isha ku hay calaamadaha (ama iskaanka u samee meelaha kulul). Makhaayadaha McDonald waxay leeyihiin Wi-Fi bilaash ah, Starbucks waxay bixisaa 30-daqiiqo oo bilaash ah Wi-Fi iyadoo la iibsanayo cabitaan kasta.
Waxa kale oo jira waxyaabo kale oo lagu beddelan karo makhaayadaha:
Khadka internet-ka oo bilaash ah ayaa laga heli karaa maktabadda Golaha Magaalada Brisbane, in kastoo laga yaabo inaad u baahato inaad ballan sii qabsato fadhigaaga horay.
Maktabada Gobolka ee Queensland, Deegaanka Dhaqanka, Stanley Place, South Bank,. M –T 10 AM–8PM, F – Su 10 AM–5PM. Helitaanka Internetka bilaashka ah (oo ay ku jirto Wi-Fi) ayaa laga heli karaa Maktabadda Gobolka Queensland, meelaha la soo xulay. Aagga InfoCentre ee ugu weyn waa mid aad u ballaaran oo leh 30-daqiiqo (ma ballansato) iyo 60-daqiiqo (ballansasho loo baahan yahay). Kombiyuutarrada 60-ka daqiiqo ah ayaa la ballansadaa iyadoo la adeegsanayo nidaamka safka marka ay yimaadaan maktabadda (looma baahna kaarka maktabadda). InfoCentre sidoo kale waxay leedahay qol aad u ballaaran iyo aag miiska loogu talagalay kuwa wata laptops u gaar ah oo doonaya inay isticmaalaan Wi-Fi lacag la'aan ah. Daabacaaddu waa $ 0.10 bog kasta, laakiin waxay u baahan tahay iibsashada kaarka nuqulka $ 2 marka lagu daro qiimaha bog kasta. Maktabaddu sidoo kale waa hawo-qaboojiye (sida qofku filan karo) sidaas darteed waa meel ku habboon in wakhti lagu qaato kulaylka badhtamaha maalintii. (cusbooneysiiyay Oktoobar 2015)
Tareenka Queensland wuxuu leeyahay Wi-Fi bilaash ah (20MB, dib ayaa loo siiyaa 4 saacadood kadib) 64 tareenadeeda ah. Waxaa lagu aqoonsadaa istiikarada waaweyn ee u dhow albaabbada, boorarka ama istiikarka yaryar ee ku yaal geesaha albaabbada gudaha. Ka taxaddar inaadan cusbooneysiin kuu daaran, ama adeegsigaagu wuxuu socon doonaa dhowr daqiiqo.
Telefoonnada lacag-bixinta ayaa ku badan aagga magaalada. Australia fursadaha xiriir ee ballaaran, sida taleefannada gacanta iyo kaararka wicitaanka, eeg galitaanka Australia
Nabdoonow oo iska ilaali khayaanada Brisbane
Brisbane waxay leedahay heer dembi yar marka loo eego magaalooyinka kale ee baaxaddaas le'eg. Xaaladaha badankood inaad ka warqabto deegaankaaga oo aad isticmaasho caqliga saliimka ah ayaa kaa badbaadin doonta adiga. Sida Sydney iyo magaalooyin kale oo waaweyn, tareenada iyo xarumaha tareenka waxaa badanaa loo tixgeliyaa inay yihiin aag dambi guud galabtii iyo habeenkiiba, hase yeeshee tareenada iyo saldhigyada waxaa ilaaliya booliska, saraakiisha Transit, shaqaalaha tareenka iyo ilaalada gaarka ah. Kaamirooyinka sidoo kale waxaa loo isticmaalaa in lagu kordhiyo amniga. Waxaa lagugula talinayaa inaad taxaddar muujiso markaad ku safreyso tareennada iyo basaska xilliyadan maalmeed.
Waa kuwan qaybo gaar ah oo fiiro gaar ah leh:
Bannaanka Bannaanka: U janjeedha inuu ka sarreeyo dambi ka badan kan xaafadaha dhexdeeda ah oo ay tahay in lagu xisaabtamo markaad booqanayso aagaggaas.
Maalmaha: Aad bey u badbaado badan tahay maalintii, laakiin isticmaalka caqliga saliimka ahi wuxuu maraa waddo dheer. Ka fogow qawlaysatada dadka, gaar ahaan haddii ay u muuqdaan kuwo qashin ah ama wax laga yaqyaqsoodo ah oo fiiro gaar ah u yeelo haddii qof la isweydiin karo ku soo dhowaado
Habeennada: Sida meelaha kale badankood, hareeraha magaalada hareeraheeda si ay uga sii khatar badnaato. Inta badan jidadka hareeraha magaalada ayaa si liidata u ifaya ama aan lahayn iftiin haba yaraatee. Waxaa lagugula talinayaa in shakhsiyaadka lugeynaya goobahan habeenki ay taxadaraan ama ay ku dhiiradaan koox.
Bartamaha Magaalada / CBD: Badanaa mid aad u ammaan badan saacadaha oo dhan.
Maalmaha: Aad bey u badbaado badan tahay maalintii iyadoo ay ugu wacan tahay joogitaan boolis oo wanaagsan iyo dadka badankood oo kaliya halkaas u jooga shaqo. In kasta oo lagu jiro fasaxyada iskuulka kooxo dhalinyaro ah ayaa shiri kara, gaar ahaan agagaarka Queen St iyo South Bank oo waxay noqon karaan kuwo isku dhac badan, laakiin badiyaa waxay ka fekeraan ganacsigooda.
Habeennada: Weli xoogaa ammaan habeenkii. Joogitaanka booliisku sidaa uma xoog badna, marka laga reebo habeennada Jimcaha iyo Sabtida, laakiin wali waxaa lagugula talinayaa inaad la safarto dadka kale. Ka taxaddar haddii aad tareen qabsato habeenkii, in kasta oo xarumaha tareennada iyo tareennada ay si fiican u kormeerayaan ayna daawanayaan CCTV. Macaamiisha Khaasnadda Casino inta badan waxay ku soo ururaan bannaanka dareenka aan loo baahnaynna waa la heli karaa goor dambe habeenkii sakhraannimo darteed. Si kastaba ha noqotee, amniga ayaa aad loo adkeeyay oo dhammaan aagga agagaarka Casino waxaa kormeeraya CCTV. Ka taxaddar dheeraad ah haddii aad joogtid South Bank habeenkii sababo la xiriira kooxo dhallinyaro ah oo halkaa ku shiraya.
Dooxada Fortitude: Joogitaanka booliisku aad buu u xoogan yahay halkan sababtoo ah baararka ayaa ku ururay.
Maalmaha: Sida ay ugu badbaado badan tahay CBD inta lagu jiro maalinta.
Habeennada (gaar ahaan Jimcaha iyo Sabtida): Darajooyinka taksiyada gaar ahaan waxay noqon karaan wax yar oo khatar ah sababtoo ah sakhraamo badan oo jahwareersan oo sugaya cabsida. Ku sug kaliya darajooyinka leh ilaalo waardiye. Joog waddooyinka mashquulka badan ee si fiican u iftiimiya oo waligaa ha isku dhibin keligaa, gaar ahaan jidadka gadaashiisa ama ka fog meelaha dadku ku badan yahay. Gaar ahaan dheddigga, waxaa lagugula talinayaa inaad u safarto labo-labo ama kooxo si looga fogaado feejignaan kasta oo aan loo baahnayn oo ka imanaya dadka sakhraansan ee sakhraansan, gaar ahaan saacadaha hore ee subaxa.
Makhaayadaha ku hareeraysan: guud ahaan wuu ka ammaan yaryahay baararka magaalada dhexdeeda, baararka iyo naadiyada sababtoo ah booliska iyo amniga oo yar. Cabbitaannadu waxay noqon karaan dhibaato markii ay ku dhow yihiin baararka makhaayadaha, gaar ahaan xilliyada xiritaanka. Dagaalada ka dhaca goobahan waa wax caadi ah.
Nambarada gurmadka ee Brisbane
Australia oo dhan, tirada adeegyada gurmadka (Booliska, Dabka iyo Ambalaaska) waa 000. Markaad isticmaaleyso moobayl ama taleefanka gacanta, lambarrada 000 iyo 112 waa lacag la'aan, kuna xir adigoo isticmaalaya mid ka mid ah shabakadaha jira.
Nambarada gurmadka sida 911 iyo 999 kama shaqeeyaan gudaha Australia.
Malaha waxa ugu xun ee ku dhici kara safarkaaga Brisbane waa gubashada qorraxda iyo arrimaha kale ee kuleylka la xiriira. Tusmada UV ee deegaanka ayaa had iyo jeer ku jirta xad-dhaaf ah qiimeynta inta lagu jiro maalinta (10 AM-3PM) waana in taxaddar la muujiyaa had iyo jeer. Ha nacasin inkasta oo, xitaa bilaha qaboojiyaha ama markii la daadiyo ay weli saameyn kugu yeelan karto fallaaraha UV ama kuleylka. Muraayadaha qorraxda, shaatiyadaha, muraayadaha indhaha iyo biyo fara badan ayaa lagama maarmaan ah.
Dad badan oo soo booqda Brisbane ayaa safarro maalmeed qaata si ay ugu raaxaystaan ​​xeebaha aadka ugu caansan ee ku yaal Gold Coast (koonfurta) ama Sunshine Coast (waqooyiga). Xeebaha waxay noqon karaan madadaalo aad iyo aad u xiiso badan markay aamin yihiin. Waxaa muhiim ah in la ogaado in xeebaha xeebta badankood ay yihiin xeebta badweynta Baasifigga oo aan lahayn wax yar oo ilaalin ah oo ay bakhaarrada iyo bayshu ka helaan. Waxay noqon karaan kuwo qatar ku dabaalan kara mawjadaha adag awgood, mowjado kacsan ama awood leh, iyo nolol bada oo waxyeelo badan leh. Hubso inaad ku dabaalanaysid kaliya xeebta meesha iyo goorta ay ilaaliyeyaashu shaqada ku jiraan iyo inta u dhexeysa calammada la hordhigay kormeerayaasha badbaadada nafta. Ka hubi ilaaliyeyaasha nafta wax kasta oo xaadir ah, ama socod hoosaadyo, dooxyo, tows, ama joogitaanka buluugyo, xaniinyo jellyfish ah, ama khataro kale oo suuragal ah ka hor dabaasha. La tali ilaalada badbaadada ee heeganka ah haddii aadan khibrad u lahayn dabaasha xeebta si ay kuu siiyaan feejignaan dheeri ah. Ka fogow inaad dhaafto dhexda-moolka haddii aadan ahayn dabaal xoog leh. Waalidiintu waa inay raacaan carruurtooda inta ay u dabbaalanayaan sida jeexjeexyada, hoostooda, durdurrada xoogga leh, iyo mowjadaha jaban ee xun waxay keeni karaan dhibaato aad u daran. Waxaa wax laga xumaado ah inay jiraan dalxiisayaal ku qaraqmay qibrad la aan ay u qabaan inay ku dabaashaan meel badda ah. Ha dabaalan ka dib markaad cabto aalkolo maxaa yeelay waxay saameyn ku yeelan kartaa awoodaada dabaasha waxayna qayb ka qaadatay qayb ka mid ah dhimashooyinka qaar. Iska ilaali inaad ku dabaasho meel u dhow qofkasta oo isticmaalaya qalab sida sagxadaha dusha sare, dabeylaha dabaylaha, baalashka, farsamada shiraaca ama farsamada gacanta sida jetskis, iyo mootooyinka.
Xagee loo socdaa Brisbane kadib
Brisbane waxay bixisaa saldhig safar maalinle ah si loo sahamiyo koonfur-bari ee Queensland. Xeebta Waqooyiga ee New South Wales sidoo kale waxaa lagu tagi karaa saacad gudaheeda haddii taraafikada fudud yahay, laakiin u oggolow ilaa labo saac safar haddii taraafikada culus tahay ama shil ka dhaco Wadada Baasifigga. Tareenka Queensland wuxuu kaloo bixiyaa adeegyo balaaran oo ka baxsan Brisbane ilaa waqooyiga iyo koonfurta magaalada iyo Gold Coast.
Woqooyi Galbeed ee Brisbane:
Dooxada Samford - qiyaastii 30 daqiiqo ayaa waqooyi-galbeed ka xigta Brisbane CBD. Dooxad miyi qurux badan leh oo ku taal tuulo taariikhi ah, Samford Village. Safar maalin wanaagsan u ah reerka.
Beerta Qaranka ee Buuraha Glass House - qiyaastii saacad waqooyiga Brisbane. Waxaa jira waddo muuqaal dabiici ah oo dhex marta buuraha oo leh dhowr fiirinood, ama waxaad aadi kartaa socodka - fududaan ama dhib, waxay kuxirantahay buurta. (Mt. Beerwah waxay bixisaa isku dhicis adag laakiin deg deg ah iyo aragti fiican oo aagga ah.) Waxa ku yaal aagag yar oo dukaanno ah oo ku yaal hareeraha waddada aagga kuwaas oo iibiya macaanka guryaha lagu sameeyo iyo noocyo ka mid ah lowska macadamia.
Beerwah - guriga ka mid ah Beerta Xayawaanka Australia, oo ay maamusho qoyska marxuumkii "Yaxaas Hunter" Steve Irwin. Gelitaanka waa $ 57 dadka waaweyn.
Xeebta Sunshine - 90 daqiiqo waqooyiga Brisbane, waxay ku habboon tahay badmaaxayaal aan lahayn ciriiri xeebaha ugu caansan koonfurta. Magaalada Noosa iyo magaalooyin dhowr ah oo magac ahaan loogu magac daray (tusaale, Noosa Heads, Noosaville) waxay bixiyaan hoy gaaban iyo mid waqti dheer ah, maqaaxiyo qaar iyo dukaamo yar oo fidsan oo loogu talagalay dalxiisayaasha miisaaniyad iyo miisaaniyad la'aan.
Xeebta Sunshine Hinterland - 90 daqiiqo waqooyiga Brisbane. Farshaxan gacmeedyo iyo makhaayado iyo makhaayado iyo socod badan oo kaynta ah iyo aragtiyo muuqaal ah oo ku yaal Blackall Ranges ee Maleny, Montville, Flaxton iyo Mapleton.
Nambour - suuqyo caan ah Arbacada iyo Sabtida.
Waqooyiga Stradbroke Island iyo South Stradbroke Island - xeebo yaab leh, 4WD iyo kalluumeysi, hoy, dhammaantoodna aad ugu dhow Brisbane.
Jasiiradda Moreton - Goobta fasaxa ee aad ugu dhow Brisbane. Quus iyo snorkel Tangalooma Wrecks, tag carrada tobogganing, 4wd.
Jasiiradda Fraser - Goobta ku taxan ee Hidaha Adduunka, oo bixisa hufnaan, harooyin bilaa dab ah, godad, kaymo iyo duurjoogta. Kaamamku waa suurtagal, ama safar maalinle ah ayaa laga diyaarin karaa Noosa. Jasiiradda ciidda ugu weyn adduunka.
Redcliffe Jasiiraddan oo ku taal 45 daqiiqo woqooyi waxay caan ku tahay xeebta dheer, dadka maxalliga ah ee saaxiibtinimada leh iyo cuntada wanaagsan, dukaamada iyo cimilada.
Gold Coast - waxay caan ku tahay inay tahay magaalo dalxiis, qiyaastii 70 km koonfur ka xigta Brisbane wadada weyn ee Baasifigga.
Dreamworld iyo Whitewater World - Beerta mawduuca oo ku taal galbeedka Gold Coast ee Coomera, Wadada Wadada Baasifigga. Raacitaanno fara badan oo xiiso leh oo ay ka mid yihiin 'Tower of Terror' iyo 'Giant Drop' iyo roogayaal duuban. Waxaa sidoo kale jira raacid cunug u habboon iyo soojiidashada xayawaanka Australia iyo bandhigyo, iyo sidoo kale bandhig Tiger ah. Whitewater World waa jardiino biyo dhig ah oo ku dhagan Dreamworld waxayna bixisaa tikniyoolajiyaddii ugu cusleyd ee raacista biyaha. Kharashaad dheeraad ah ayaa ku baxa galitaanka, laakiin waxaad ka iibsan kartaa kaar kaa dhigaya labada jardiinooyin qiimo jaban.
Movieworld - Beer kale oo duluc leh oo u dhow 'Dreamworld' iyo 'Wet' n 'World Water World.' Guud ahaan dheer, riwaayadaha filimada iyo jawiga, bandhigyada iyo soojiidashada.
Seaworld - Beer-biyoodka mawduuc-ku-dhisan oo ku xardhan jasiirad u dhexeysa Xeebta Bada ee Gold Coast iyo Badweynta Baasifigga, oo ku taal Southport (woqooyiga woqooyi ee Gold Coast.) Dhowr safar, laakiin caan ku ah bandhigyada xayawaanka ee cajiibka ah iyo bandhigyadeeda.
Wet 'n' Dunida Biyaha Duurjoogta ah - Beerta biyaha ee Gold Coast, oo leh raacitaanno kulul iyo barkado xilliga qaboobaha. Tiro badan oo raaxo xiiso leh iyo waliba meelo nasasho oo jilicsan.
Mt. Beerta Qaranka Tamborine - aagag ballaaran oo Beerta Qaranka ah oo lagu daray farshaxanno, farshaxanno, galleello iyo wixii la mid ah, oo u dhow dhowr dalxiis oo kaymo ah. Waxaa ku yaal dukaanno fudge aad u fiican oo ku yaal dusha sare ee Mt. Tamborine oo bixisa shaybaarro bilaash ah oo deeqsinimo leh iyo dhadhan kala duwan oo la yaab leh.
Gold Coast / Surfers Paradise - Mecca dalxiis, iyo muran la'aan aagga ugu caansan ee Gold Coast. Waxay ku yaalliin xeebta xeebteeda nolosha lagu ilaaliyo, martigelinta Caville Avenue, iyo dhowr xarumo ganacsi.
Hoose Moreton Bay
Koonfur Bari Queensland - waxaa ku jira meelaha sida Moreton Island (halkee Scooby Doo waa la duubay) iyo Jasiiradda St. Helena (oo ahayd xabsi hore u ahaan jiray amniga ugu badan ee dambiilayaasha.)
Ipswich - waxay ku taal 40 km galbeedka magaalada Brisbane. 45 daqiiqo oo wadada looga baxo Magaalada Brisbane.
Xarunta Skydiving ee Brisbane - waxay bixisaa koorsooyin samada ka duulaya iyo koorsooyin hoos u dhac sare leh. Willowbank.
Madxafka Tareenka - Qoyska oo dhami waxay ku raaxeysan doonaan goobta uu ku dhashay ee tareenka Queensland waxayna ku raaxeysan doonaan bandhigyada is-dhexgalka ah ee madxafkan abaalmarinta ku guuleystay. North Street, Waqooyiga Ipswich.
Naadiga Golf ee Brookwater - Koorsada golf golf ee 18-ka ah ee loo yaqaan 'Greg Norman golf golf' iyo koorsada marinka dadweynaha ee lambarka 2aad ee Australia.
Jidka Queensland - Wareegga tartanka ugu horreeya ee Queensland. Tani waa meesha kaliya ee u dhow Brisbane halkaas oo xubnaha bulshada ay ku wadi karaan isla goobta orodka sida darawalada xirfadleyda ah. Champions Way, Willowbank.
Beerta Qaranka ee Buuraha Bunya - Saddex saacadood galbeedka magaalada Brisbane. Mid ka mid ah jardiinooyinka qaran ee ugu da'da weyn Queensland. Hoyga geedkii bunya ee hore iyo noocyo kale oo badan oo dhir, shimbiro iyo xayawaano kale ah. Joog ugu yaraan seddex habeen si aad ugu hesho waqti aad ku dalxiis tagto beerta nasashada.
1. Masjidka Taqwa
Wadada 117 Telegraph, Bald Hills Brisbane, Qld 4036
Taleefan: +61 7 3603 2066 Email: info at masjidtaqwa.org.au Hindisaha dhisida Masjid dhinaca waqooyi ah wuxuu ku yimid walaalaha muslimiinta ah ee ka soo jeeda waqooyiga oo u baahan meel laga akhriyo Salaah sidaasna waxay ku bilaabatay 6 walaalo isticmaalaya mid ka mid ah qolalka ay ku nool yihiin si ay ugu tukadaan Jamaacada.
Badhtamihii-2000 riyadii iyo baahidii ayaa rumowday oo hawl adag, hufnaan iyo hagitaan ka timid Ilaaha Qaadirka ah Masjidka Taqwah ee Bald Hills, ayaa ku dhalatay. Waxay ka bilaabantay daasad yar oo keliya oo ay ku yaalliin oo keliya tas-hiilaad yar, laakiin waxay ku timid taageero maaliyadeed oo laga helay walaalaha Muslimiinta ah ee ku nool gobolka weyn ee Brisbane iyo weynaanta Allaha weyn (swt) Masjidka ayaa ku soo kordhay sida uu yahay maanta.
Maanta waxaan nasiib u helnay inaan helno Masjid qurux badan oo loogu talagalay bulshada si joogto ah u koraysa. Iyada oo leh qalab ay ka mid yihiin laakiin aan ku xaddidnayn waxyaabaha soo socda (ragga iyo dumarka labadaba); Qalabka Salaax ee qaboojiyaha loogu talagalay qiyaastii 300 rag ah iyo 80 haween ah; musqulaha; tas-hiilaadka wudhu; aagga baabuurta la dhigto ugu yaraan 80 baabuur.
Alxamdulilaah qoysas badan ayaa maanta soo xaadira Masjidka.
2. Masjidka Holland Park
309 Xannaanada Wadada, Holland Park, QLD 4121
Telefoonka: +61 7 3343 4748 Email: hpmosque at gmail.com
Masjidka Holland Park waa Masjidka ugu faca weyn Xeebta Bari ee Australia waxaana si isdaba joog ah loo furay in ka badan 100 sano. Waxaa aasaasay 1908 oo ay soo direen jasiiradaha reer Afgaanistaan, goobtan 120 sano jir ah waxay hormuud u tahay dhammaan bulshooyinka Islaamka, waana xarun weyn oo xagga ruuxda ah ee Brisbane iyo magaalooyinka ku hareeraysan. qayb ka mid ah dharka Australiya muddo qarni ka badan. Waxaan u adeegnaa baahiyaha sii kordhaya ee bulshada muslimiinta ah, iyadoo la siinayo meel aamin ah, nabad ah oo loo wada dhan yahay dhamaan xubnaha bulshada.Masjidka Holland Park waxaa lagu soo bandhigay taxanaha TV-ga ee aadka loo qiimeeyo "Masjidka Xiga Masjidka". Fadlan ku soo dhawow masjidka Holland Park.
Masjidka Holland Park (ama Masaajidka Brisbane) waa taallo ku taal Brisbane. Waxaa la dhisay 1908, masaajidkeedii caadiga ahaa ee loo yaqaan 'Queenslander-style alwaax' ayaa la bedelay oo kaliya 58 sano ka dib, oo lagu beddelay 2 sheeko, dhisme leben casri ah intii lagu jiray dayactirkiisii ​​ugu dambeeyay ee 1966. Waa masaajidkii ugu horreeyay ee laga dhiso Queensland si loogu daboolo baahida Muslimiinta. , maahan oo keliya goob cibaado laakiin xarun u ah bulshada iyo isdhexgalka bulshada sidoo kale.
Masjidka Holland Park sidoo kale waa masjidkii ugu horreeyay uguna kali badnaa ee Australia kaas oo aan waligiis albaabkiisa xidhin in ka badan 100 sano, taas oo ka dhigaysa hay'ad diineed run ah oo astaan ​​u ah bulshada Muslimiinta Australia!
Tani waxay sidoo kale ka hadlaysaa wax ku saabsan taariikhda Muslimiinta iyo Islaamka ee Australia, iyo sida ay ugu dhex milmeen dhismaha qiyamka iyo dhaqanka Australiya.
3. Bulshada Islaamka ee Darra (ISD)
219 Douglas St, Oxley QLD 4075 Telefoon: +61 7 33754579 Email: xoghayaha isd.org.au
Bulshada Islaamka ee Darra (ISD) waxaa la aasaasay 1983 waxaana loo diiwaan galiyay bulsho isku dhaf ah koox walaalo ah oo ka soo haajiray Fiji. Xubnaha Aasaasayaasha waxay kala ahaayeen Late Haji Taj Mohammed, Late Bahadur Ali, Late Haji Shariff Abdul, Sayraz Mohammed, Hafeez Ali Khan, Shamsher Ali, Mohammed Shareef and Azam Khan.Guddiga Mashruuca Masaajidka ayaa go’aansaday in masaajidka loo dhiso marxalado maadaama lacagtii la helay. Guddigu si joogto ah ayey u kulmeen si ay uga shaqeeyaan istiraatiijiyado koox ka mid ah mutadawiciintiina si hagar la'aan ah ayey ugu shaqeeyeen hirgalintooda. Marxaladdan bulshada waxay haysatay oo keliya $ 8,000 oo kaash ah waxaana lagu lahaa deyn ah ilaa $ 50,000 si dib loogu bixiyo. Dadaal wadajir ah ayaa la sameeyay si loo uruuriyo illaa $ 40,000 si deynta loo bixiyo iyo $ 35,000 dheeraad ah oo lagu shubo aaladda dhulka. Tan waxaa lagu gaadhay seddex bilood gudahood bishii Luulyo 1999 ayaa la dhigay sagxada dhulka hoostiisa.Kadib markii la dhameystiray, howsha dhismaha waxay u bilaabatay si qoto dheer iyadoo mutadawiciinteenu ay qabteen intii ugu macquulsan, guud ahaan maalmaha fasaxa ah iyo wixii aan qaban karin nafteena ayaa qandaraas lagu galay . Isla mar ahaantaana koox mutadawiciin ah ayaa albaabka ka garaacayay tabarucaadka si loo hubiyo in loo heli karo lacag ku filan shaqada si ay u sii socoto xannibaada. Walaalo badan ayaa iskaa wax u qabso ku shaqeeyay waqtigooda, xirfaddooda iyo qalabkoodaba intii lagu jiray marxaladda dhismaha. Walaalo badan ayaa iyaguna si adag uga shaqeeyey bixinta quraacda, qadada iyo cabbitaannada.
4. Masjidka As-Sunnah
Ururka Islaamka ee Lutwyche, Inc33 Fuller Street Lutwyche 4030 QLD
5. Masjid al Faaruuq (Xarunta Islaamka)
Telefoon: 1300 133 956
Masjid al Faaruuq wuxuu hiigsanayaa inuu u adeego sidii meel aamin ah oo lagu tukado, milicsiga, ka qaybqaadashada bulshada, barashada diinta Islaamka iyo hanuuninta iyadoo la ilaalinayo akhlaaqda iyo qiyamka lagu qeexay Quraanka Kariimka ah. Wadahadalka diimaha kaladuwan Masjid al Faaruuq wuxuu kobciyaa xiriirka ummadaha kale iyadoo lagu saleynayo dhexdhexaad iyo dulqaad. Waxaan ka mid nahay dhammaan dhaqamada oo waxaan ka gudubnaa xuduudaha siyaasadeed. Waxaan nahay wadnaha bulshadeena.
Markii hore waxaa aasaasay horraantii 1990-meeyadii muslimiin cusub aagga, Muslimiinta maxalliga ah waxay iibsadeen kaniisad hore oo Anglican ah waxayna la jaanqaadeen dhismahan si loogu waafajiyo shuruudaha cibaadada Muslimiinta. Masaajidka maanta taagan isla goobtan ayaa dib loo dhisay kadib markii dab la qabadsiiyay dhismihii hore ee masjidka bishii Sebtember 21, 2001, toban maalmood uun ka dib weeraradii argagixiso ee ka dhacay Magaalada New York. Masjidka Kuraby ayaa sidaa ku noqday masaajidkii ugu horreeyay adduunka ee waxyeelleeya ama baab'iya iyadoo jawaab toos ah looga dhigayo weeraradii Sebtember 11.
Maanta masaajidku wuxuu hoy u yahay bulsho dhaqamo firfircoon oo reer Australia ah. Waxaan haynaa in ka badan 40 jinsiyado ah oo qayb ka ah jamaacadayada waxaanan ku siineynaa waxqabadyo aad u tiro badan dusha sare ee salaadaha maalinlaha ah ee ragga iyo dumarka.
Hoteelada Xalaal & Muslim Friendly Hotels ee Brisbane
Guryaha Fasaxyada Aabon & Motel Brisbane
Abbey Guryaha Brisbane
Hoteelka Adina Apartment Hotel Brisbane
Safiirka Motor Inn Brisbane
Inple Gawaarida Gawaarida
Hoteelka Astor Metropole Brisbane
Saldhigga Dhexe ee Brisbane
Saldhigga Martida ee Saldhigga Brisbane
Beerwah Hideaway Raaxo B&B Hotel
Madaarka Galbeed ee ugu Fiican 85 Motel Ascot
Madaarka Galbeedka Ugu Fiican Hacienda Motel Brisbane
Guryaha ugu Wanaagsan ee Astor Metropole Brisbane
Best Gregory Terrace Motor Inn Brisbane
Best Western Sunnybank Star Motel & Guryaha Brisbane
Madaarka Brisbane Airport
Hoteelka Brisbane International Virginia
Hoteelka Brisbane International Windsor
Hoteelka Brisbane Riverview
Hoteelka Central Brunswick Hotel Brisbane
Guryaha Central Cosmo Brisbane
Guryaha Dhexe ee Dockside Brisbane
Guryaha Central Hillcrest Brisbane
Guryaha Central West End Brisbane
Timirta Magaalada Motel Brisbane
Raaxada Inn & Suites Northgate Airport
Raaxada Inn & Suites Robertson Gardens
Raaxo Inn Airport Admiralty Motel
Hoteelka Diana Plaza Brisbane
Guryaha 'Essence Serviced Apartments' Brisbane
Guryaha Evolution Brisbane
FV 4006 Guryaha Brisbane
Hoteelka iStay River City Brisbane
Hoteelka Guryaha MacArthur Chambers
Mantra On Hotel Brisbane Hotel
Hoteelka Mantra South Bank Brisbane
Huteelka Marriott Brisbane
Duulaanka Cad ee 'Clear Mountain Lodge'
Guryaha Midtown Brisbane
Guryaha Mint Brisbane
Niche Hoteelo Raaxo Yar Yar Springfield Lakes
Hoteelka diyaaradaha ee Novotel Brisbane
Hoteelka Novotel Brisbane
Geed 212 Margaret Brisbane
Guryaha Oaks Aurora Brisbane
Geedo Felix Brisbane
Guryaha Oaks Lexicon Brisbane
Q Resorts Gabba Guryaha Dhexe Woolloongabba
Q Resorts Skyline Apartments Brisbane
Tayada Madaarka Tayada Caalamiga ah ee Brisbane
Tayada Hotel The Inchcolm Brisbane
Tayada Inn Airport Heritage Motel Brisbane
Quattro On Guryaha Astor Brisbane
Quay West Suites Hotel Brisbane
Quest On Story Bridge Kangaroo Point Adeegyada Guryaha
Hoteelka Rendezvous Brisbane Anzac Square
Rendezvous Studio Hotel Brisbane oo ku taal George
Guryaha Jamhuuriyadda Brisbane
Garoonka Stamford Plaza Brisbane
Sudima Suites Apartment Brisbane
Jasiiradda Tangalooma Resort Moreton Island
Docks On Guryaha Goodwin Brisbane
Hotelka Limes ee Brisbane
The Hotel Hotel Brisbane
Deganaanshaha Barta Brisbane
Guryaha Shirarka ee Brisbane
Toowong Central Motel guryaha
Ganacsatada Hotel Brisbane
Huteelka Travelodge Garden City Brisbane
Khasnadda Casino & Hoteelka Brisbane
Guryaha Tribeca Brisbane
eHalal Safarka Mart > Safarka Xalaal ee Australia > Tilmaamaha Safarka ee Brisbane Xalaal
Tilmaamaha Safarka Xalaal ee Ankara